ရိုဇဟ် အဲအ်သေကာဖ် လကြည့်ခြင်း ဖေသ်ရဟ်(မရ်ဂျာလေးပါး ၏ ဖသ်ဝါများနှင့် အညီ)
ဇူလိုငျ ၇, ၂၀၁၆ - ၁၂:၀၁ နံနကျ
News Code : 764523
بسم الله الرحمن الرحیم အမှာစာ السلام علیکم ورحمته الله وبرکاته အလ်ဟမ်ဒိုလစ်လ္လာဟ် ရှေ့စာမျက်နှာများတွင် လူကြီးမင်း အနေဖြင့် ရိုဇဟ်များ ၊အဲအ်သေကာဖ်ဆိုင်ရာ စည်းမျည်း၊စည်းကမ်း ကိုဖတ်ရပါမည်။ ဖေသ်ရဟ် နှင့်လကိစ္စများကို လည်း pamphlet (စာစောင်ငယ်) အဖြစ် ပထမ ကတည်းက အချို့ မိုအ်မေနီမှ ဝေခဲ့ပြီးပါပြီး။ သင့်လျှော်သည့် အတွက် စာအုပ်၏ အဆုံးသတ်တွင် ထည့်လိုက်ပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ မရ်ဂျာ(၄) ပါး၏ ဖသ်ဝါများကို အခြေခံ ထားပါသည်။
ရိုဇဟ် အဲအ်သေကာဖ် လကြည့်ခြင်း
ဖေသ်ရဟ်(မရ်ဂျာလေးပါး ၏ ဖသ်ဝါများနှင့် အညီ)
ကျမ်းပြုအာလင်မ် - H.I ဟာဂ်ျ မိုဟမ္မဒ်ရေဇာဒါဝဒ်ဒါနီ
အလ်ဟမ်ဒိုလစ်လ္လာဟ် ရှေ့စာမျက်နှာများတွင် လူကြီးမင်း အနေဖြင့် ရိုဇဟ်များ ၊အဲအ်သေကာဖ်ဆိုင်ရာ စည်းမျည်း၊စည်းကမ်း ကိုဖတ်ရပါမည်။
ဖေသ်ရဟ် နှင့်လကိစ္စများကို လည်း pamphlet (စာစောင်ငယ်) အဖြစ် ပထမ ကတည်းက အချို့ မိုအ်မေနီမှ ဝေခဲ့ပြီးပါပြီး။ သင့်လျှော်သည့် အတွက် စာအုပ်၏ အဆုံးသတ်တွင် ထည့်လိုက်ပါသည်။
ဤစာအုပ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ မရ်ဂျာ(၄) ပါး၏ ဖသ်ဝါများကို အခြေခံ ထားပါသည်။
၁။မရ်ဟွန်မ် အာယာသွလ္လာဟ် ခူဝီး 
၂။မရ်ဟွန်မ် အေမာမ်ခိုမေနီ 
အချို့နေရာများမှအပ ဖသ်ဝါများ၏ ကွဲပြားမှုကိုမတင်ပြထားပါ။သို့သော်
ဥပဒေ၊စည်းမျည်း၊စည်းကမ်းများကို ရှရီအီသတိ(احتیاط)နှင့် အညီရေးသား ဖော်ပြနိုင်အောင် ကြိုးစားထားပါသည်။
အကျယ်တဝင့် သိလိုသည့်မိတ်ဆွေများ (توضیح المسائل) နှင့် အခြား စာအုပ်များတွင် သွားရောက် လေ့လာ နိုင်ပါသည်။
စာအုပ် ကို Reader Friendly ဖြစ်ရန် ၊စာဖတ်သူ အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့် စကားလုံးများဖြင့် မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်းပုံစံ တင်ပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစားထားပါ သည်။ စာဖတ်သူအတွက် ဝန်ထုပ် အဖြစ်မခံစားရအောင် ဖြစ်ပါသည်။
ဤစာအုပ်ငယ် တွင်ဖော်ပြထားသည့် မွတ်စ်စဟဗ်များကို ရဂျာအေမတ် သွလူးဗီယသ် ( رجاء مطلوبیت) နီယသ် ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ရဂျာအေမတ် သွလူးဗီယသ် ( رجاء مطلوبیت) ဆိုသည်မှာ ဤအလုပ်သည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် လိုလားသည့် လုပ်ရပ်ဟု မျှော်လင့်ခြင်းကို ခေါ်ဆို ပါသည်။
၁- ဤစာအုပ်ကို ပြုစုသီကုံးရာတွင် -
(က) H.I ဂျနာဗ် မိုဟမ္မဒ်ဟိုစိုင်း ဖလာဟ်ဇာဒေဆပ် ရေးသားပြုစုထား သည့် (آموزش فقه (سطح عالی ) ) စာအုပ်
(ခ) H.I ဂျနာဗ် မိုဟမ္မဒ် ရေဇာ မွရ်ှဖကီပူးရ် ရေးသားပြုစုထား သည့် ( احکام آموزشی (عبادات سطح3) စာအုပ်
(ဂ)H.I ဂျနာဗ်ဆယက်ဒ် မွတ်ဂ်ျသဗာဟိုစိုင်း(န)နီ ဆပ် ရေးသားပြုစု ထား သည့် ( احکام روزه) စာအုပ် တို့အား အပြည့်အဝ အသုံးပြုထားပါသည်။
၂- လေးစားအပ်သည့် ဆရာ H.I မောင်လာနာ အလီရေဇာ ဆွာလေဟီ ဆပ် အနေဖြင့်လည်း တည်းဖြတ်မှု နှင့် ပြုပြင်တည်းမတ်ပေးမှု ကို ပြုခဲ့ပါ သည်။
၃- နောင်တော် ရေဇာ ရေဇ်ဝါနီ အနေဖြင့်လည်း တန်ဖိုးရှိအကြံပေးမှုများ ကို ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ Technical အရလည်းကူညီခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် အနေ ဖြင့် ၎င်းတုိ့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ အတွက် ဒိုအာ လည်းပြုပါသည်။
မိုဟမ္မဒ် ရေဇာ ဒါဝဒ်ဒါနီ
ရှအ်ဗာန် လ ၂၇ ၇က် ၊ ဟီဂျရီ သက္ကဂာဇ် ၁၄၂၉
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်
ရိုဇဟ် ၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက် 17
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အခေါ်အဝေါ် တွင် ဤ စကားလုံး၏ အဓိပ္ပာယ် 17
ရိုဇဟ် ၏ အမျိုး အစားများ 17
ဝါဂျစ်ဗ် ရိုဇဟ်များ ၊ဥပမာ 19
ရိုဇဟ်များ အတွက် နီယသ် 19
နီယသ်၏ အချိန် ဘယ်အထိလဲ 23
ရိုဇဟ် ကို ပျက်စေသည့် အရာများ 26
၁- စားခြင်း၊သောက်ခြင်း 27
ဆေးစက် အဖြင့်သုံးခြင်း 28
သွားဖုံးမှ သွေးထွက်ခြင်း 29
ရိုဇဟ် ၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်
ရိုဇဟ် ကိုအာရဘီ ဘာသာစကားတွင်( صوم )ဟုခေါ် ဆိုပါသည်။
အဘိဓာန် (Dictionary ) စာအုပ် အရ ( صوم ) အဓိပ္ပာယ်မှာ - အရာတစ်ခုခုကိုတားခြင်း (သို့မဟုတ်) ရှောင်ခြင်းကို ခေါ်ဆိုပါ သည်။
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အခေါ်အဝေါ်တွင် ဤ စကားလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်
စားခြင်း၊သောက်ခြင်း နှင့် အချို့ အရာများမှ ရှောင်ခြင်း
ဘယ်အချိန်မှ ပြီး ဘယ်အချိန် အထိ ?
နံနက် ဖဂျရ်နမာဇ် အဇါန်အချိန်မှ စပြီး မဂ်ရိဗ် နမာဇ် အဇါန် အချိန် အထိ
အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သခင်၏ အမိန့်တော်မြတ်ကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန်
အမေး (၁) : ဘာအတွက်ကြောင့် ၎င်းကို ရိုဇဟ် လို ခေါ်ရပါသနည်း ?
အဖြေ : အကြောင်းမှာ ဤအေဗာဒသ်သည် ညတွင် ပြုလုပ်ရတာ မဟုတ်ပဲ နေ့ တွင် ပြုလုပ်ရပါသည် ။ နေ့ ကို (ဖွာရစီဘာသာဖြင့်) ရိုဇ် လို ခေါ်ပါသည် ။ ဤအတွက် ကြောင့်ရိုဇဟ် လို့ခေါ်ပါသည် ။
ရိုဇဟ် ၏ အမျိုး အစားများ
ဝါဂျစ်ဗ် ရိုဇဟ် (ဥပမာ:လမြတ် ရမ်တွာန် ၏ ရိုဇဟ် )
မွတ်စ်သဟဗ် ရိုဇဟ် (ဥပမာ:ရဂျဗ်လ (သို့) ရှအ်ဗာန်လ ၏ ရိုဇဟ် )
မက်ရူးဟ် ရိုဇဟ် (ဥပမာ:အာရူရာနေ့ ၏ ရိုဇဟ် )
ဟရာမ် ရိုဇဟ် (ဥပမာ:အီးဒ်ဒိုလ်ဖေသ်ရ် နှင့် အီးဒ်ဒေကုရ်ဘာန် ၏ ရိုဇဟ် )
အကယ်၍ ရိုဇဟ် ထားလျှင် အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်မည်ဆိုလျှင် ဝါဂျစ်ဗ် ရိုဇဟ် ထားခြင်းသည်လည်း ဟရာမ် ရိုဇဟ် ဖြစ်သွား မည်ဖြစ် ပါသည်။
ရိုဇဟ် ထားလျှင် သေဆုံးသွားမည်ဟု သိနေပါတယ်။
ရောဂါ အတွက် အချိန် ကြာမှုကို ဖြစ်စေမည် ။
အမေး (၂) :ဤအခြေအနေကို ဘယ်လို သိနိုင်မှာလဲ ?
အဖြေ : ကိုယ်တိုင် ယုံကြည် စိတ်ချရ သည့်အနေအထား ကြောင့် ဖြစ်စေ
အတိတ်၏ အတွေ့အကြုံ များ အရကြောင့် ဖြစ်စေ
စိတ်ချယုံကြည်ရသည့် ဒေါက်တာ၏ ပြောကြားချက်ကြောင့် ဖြစ်စေ
အသိဥာဏ် အထောက်အထားကြောင့် ဖြစ်စေ
(၁) ရိုဇဟ် ထားလျှင် အန္တရာယ် ရှိသည် ။ ကျွန်တော်အနေဖြင့် ဒီလိုဘာ အန္တရာယ်မှ မရှိဘူးလို့ ယုံကြည်ပါသည်။
(၂) ရိုဇာ ထားပါ။ မည်သည့် အန္တရာယ်မှ မရှိ ပါ ။တကယ်တော့ ရိုဇဟ် ကျွန်တော်အတွက် အန္တရာယ် ဖြစ်စေကြောင်း စိတ်ချယုံကြည်ပါသည်။
အမေး (၃) : ဤအခြေအနေ တွင် ဘယ်သူစကား ကို အတည်ပြုရမည် နည်း ? ကျွန်တော် လား? (သို့မဟုတ်) ဒေါက်တာ လား ?
အဖြေ : အသင်၏စကား ကိုအတည်ပြုရပါမည်။ အသင်အနေဖြင့် မိမိ ၏ စိတ်ချ ယုံကြည်မှု အပေါ် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် ရပါ မည်။
ဝါဂျစ်ဗ် ရိုဇဟ်များ ၊ဥပမာ
၁။လမြတ်ရမ်တွာန် ၏ ရိုဇဟ်များ
၄။ အဖေ၊အမေ၏ ကဇွာ ရိုဇဟ်များ သားအကြီးဆုံးထားရန်
၅။၊အဓိဋ္ဌာန်၊ ကတိသစ္စာပြုထားသည့် ရိုဇဟ်များ
၆။အအ်သေကာဖ်ထိုင်သူများ အတွက်သုံးရက်မြောက်နေ့ တွင်ထားရ မည့် ရိုဇဟ်
၇။ ဟဂ်ျယေသမသိုအ် အတွက်ကုရ်ဘာနီ အစား ၊ထားရသည့် ရိုဇဟ်များ
(အကျယ်တဝင့် သိရှိရန် (مناسک حج ) ကျမ်းကိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ )
ရိုဇဟ်များ အတွက် နီယသ်
အမေး (၁) : ရိုဇဟ် အတွက်နီယသ် ပြုရင် အရေးကြီးပါသလား?
အဖြေ :ဟုတ်ကဲ့။ ရိုဇဟ်ဆိုတာ အေဗာဒသ် ဖြစ်ပါတယ်။ အေဗာဒသ် အတွက် နီယသ် မပြုဘဲ မဖြစ်နိုင်ချေ။
အမေး (၂) :နီယသ်ဆိုတာ ဝါကျအချို့ ပြောတာကိုခေါ်ပါသလား?
အဖြေ :မဟုတ်ပါ။ နီယသ်ဆိုသည်မှာ နှလုံးသားတွင် အဓိဋ္ဌာန် ပြုခြင်း ကိုခေါ်ဆိုပါသည်။
အမေး (၃) : ဤ အဓိဋ္ဌာန် သည်မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသနည်း ?
အဖြေ : ကျွန်တော်မျိုး • နံနက် ဖဂျရ်နမာဇ် အဇါန်အချိန် မှ စပြီးမဂ်ရိဗ် နမာဇ် အဇါန် အချိန် အထိ • ရိုဇဟ် ထားပါတယ် • ကိုရ်ဘသန်အေလ္လာဟ် ( قربةًاِلی الله)
အမေး (၄) : ကိုရ်ဘသန်အေလ္လာဟ်( قربةًاِلی الله) ဆိုတာ ?
အဖြေ:အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အမိန့်တော်မြတ်ကို လက်တွေ့ အကောင် အထည်ဖော်ဖို့ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ရလာဒ် အဖြစ် မလွဲမသွေ အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် နှင့်နီးကပ်မှုကို ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
အမေး (၅): နံနက် ဖဂျရ်နမာဇ် အဇါန်အချိန်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ ? နမာဇ် အချိန် ရောက်ပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာ မှ ကျွန်တော်တို့ ရက်ကွက် တွင် ရှိဗလီမှာ အဇါန်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ရိုဇဟ် ၎င်းအဇါန် အချိန်က နေ စတာ ဟုတ်ပါသလား?
အဖြေ :မဟုတ်ပါ။ နံနက် ဖဂျရ်နမာဇ် အဇါန်အချိန်ဆိုတာ ဖဂျရ်နမာဇ် ၏ ပထမဆုံးအချိန် ကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ စိတ်ချယုံကြည်ရဖို့ အတွက် အရေးကြီးအချက်မှာ -
နံနက်ဖဂျရ်နမာဇ် မတိုင်ခင် အချိန် အနည်းငယ်အလျင် စားခြင်း ၊သောက်ခြင်း စသည်တို့ကို ရပ်လိုက်ရပါမယ်။
မဂ်ရိဗ် နမာဇ် အဇါန်ပြီးနောက်လည်း အချိန်အနည်းငယ်ကြာ
ရှောင် စရာများကိုရှောင်ပြီးနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လမြတ်ရမ်တွာန်၏ ရိုဇဟ်များကို ထားနေစဉ် အကယ်၍ မိမိ နီယသ် ကို ပြောင်း လိုက်မည် (သို့မဟုတ်) တမင်တကာရိုဇဟ်ကို ပျက်စေသည့် အရာတစ်ခုခုကို လုပ်ရန် အဓိဋ္ဌာန် ချပါက ၊ လက်တွေ့ အကောင် အထည်မဖော်ဆောင်သေးလျှင်လည်း ရိုဇဟ် ပျက်သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။
အမေး(၆):ထားမည့်ရိုဇဟ် မည်သည့် အမျိုးအစား ရိုဇာ ဖြစ်ကြောင်း ရည်ရွယ်ဖို့ အရေးကြီးပါသလား ? မရည်ရွယ်ဘဲ ရိုဇာထားလိုက်မည် ၊ပြီးမှ မိမိသဘောဆန္ဒဖြင့် ဤ ရိုဇဟ်သည် ကဇွာရိုဇဟ် (သို့မဟုတ်) ကဖွာရာ ရိုဇဟ် ဟု ရည်ရွယ်လို့ရပါသလား?
အဖြေ: မရပါ။ ရည်ရွယ်ရန် အရေးကြီးပါတယ်။ ဤရိုဇဟ်သည် ကဇွာ ရိုဇဟ် ဖြစ်ပါတယ်၊ (သို့မဟုတ်) ကဇွာရိုဇဟ် (သို့) အခြားရိုဇဟ် တစ်ခုခု ဖြစ်ကြောင်း ရည်ရွယ်ရပါမယ်။
လမြတ်ရမ်တွာန် တွင်ထားရသည့် ရိုဇဟ်များသည် သူ့ အလိုအလျှောက် ရမ်တွာန်လမြတ် အတွက်ထားရသည့်ရိုဇဟ်များ ဖြစ်ကြောင်း ရည်ရွယ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဤလမြတ်တွင် မည်သည့် အခြား ရိုဇဟ်မျှ ထား၍မရသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အမေး(၇):ကျွန်တော်အနေဖြင့် မနက်ဖန် လမြတ်ရမ်တွာန်၏ ၁၅ရက်လား (သို့မဟုတ်) ၁၆ရက်လားဆိုတာကိုမေ့သွားပါတယ်။ ဤအတွက် ရိုဇဟ် အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါသလား ?
ဖြေ:မရှိပါ။ ဤအတွက်ကြောင့် ရိုဇဟ် အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု မဖြစ်ပါ။
အမေး(၇):ကျွန်တော်အနေဖြင့် အခုအချိန်ထိ မနက်ဖန် ရိုဇဟ် ထားဖို့ နီယသ် မပြုရသေးပါ။ ကျွန်တော် ဘယ်အချိန်အထိ နီယသ် လုပ်နိုင် ပါသနည်း ?
အဖြေ : ရိုဇာ ဘယ်အမျိုး အစားဆိုတာ ကို ကြည့်ရပါမယ်။ ဝါဂျစ်ဗ် လား?
မွတ်စ်သဟဗ်လား? ဝါဂျစ်ဗ်ဆိုလျှင် မည်သည့် အမျိုးအစား ဖြစ်တယ် ဆို တာ ကြည့်ရပါမယ်။ အောက်တွင် ဤအတွက် ရှင်းလင်းပေး ထားပါ တယ်။သို့သော် သတိပြုရမည့် အချက်မှာ -
အချို့ ကိစ္စများတွင် အသင်အနေဖြင့် နံနက်ဖဂျရ်နမာဇ်အဇါန် ပြီးနောက် လည်း နီယသ်ပြုခွင့်ရှိတာကိုတွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒါလည်းပဲ နံနက် ဖဂျရ်နမာဇ်အဇါန်အချိန်မှ စပြီးလက်ရှိ အချိန်အထိ ရိုဇဟ် ကိုပျက်စေသည့် အရာများကို မပြုထားသည့် အခြေအနေမှသာလျှင် ဖြစ်နိုင်ပါ သည်။
နမူနာ - မွတ်စ်သဟဗ်ရိုဇဟ် ကို မဂ်ရိဗ် အချိန် မတိုင်ခင် တစ်မိနစ် အ လျင်လည်း နီယသ် ပြု ခွင့်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းအနေဖြင့် နေ့လည် စာ ထမင်းစားထားလျှင် ၎င်းအနေဖြင့်ရိုဇဟ် ထား၍ မရချေ။
နီယသ်၏ အချိန် ဘယ်အထိလဲ
အဇါန် မတိုင်ခင် အလျင် ဇဟိုရ်
 = နီယသ်လုပ်နိုင်သည်။ရိုဇဟ်ပိုင်၏။  နီယသ်မလုပ်နိုင်ချေ။
အရေးကြီးမေးခွန်း (၁) :
ရှအ်ဗာန်လ ၂၉ ရက်နေ့ ကုန်သွားပြီး၊လမြင်၊မမြင် မသိရသေး ချေ။ ကျွန် တော်ဘာလုပ်ရပါမည်နည်း ?
အဖြေ : • အကယ်၍ လ၊မြင်မည်ဆိုလျှင် မနက်ဖန် လမြတ် ရမ်တွာန်၏ ပထမနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဇာထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ လ၊မမြင်မည်ဆိုလျှင် မနက်ဖန် ရှအ်ဗာန်လ ၏ ၃၀ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဇဟ်ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။
အကယ်၍ လ၊မြင် ၊မမြင်သံသယ ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေ တွင်လည်း ရိုဇာထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။
မေးခွန်း(၂): သံသယ ဖြစ်နေ၍ ရိုဇဟ် မထားခဲ့ပါ။ နောက်မှ လမြင် ကြောင်း သတင်းသိရပါတယ်။ ထိုအချိန် ဘာလုပ်ရမည်နည်း ?
အဖြေ : အသင်အနေဖြင့် ဂိုနာ မကျူးလွန်ခဲ့ပါ။သို့သော် ၎င်း ရိုဇဟ် အတွက် ကဇွာ ပြန်ထားရပါမယ်။
မေးခွန်း(၃):ကျွန်တော် သံသယ ဖြစ်စေသည့်နေ့ ကို ရိုဇဟ် ထားချင်ပါ တယ်။ မည်သည့် နီယသ်ဖြင့် ထားရမည်နည်း? အကယ်၍ လမြတ် ရမ်တွာန် ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ၎င်းလအတွက် ရိုဇဟ် ၊မဖြစ်ခဲ့လျှင်ရှအ်ဗာန် လ အတွက် ရိုဇဟ် ဟု နီယသ် ပြုလို့ ရပါသလား ?
အဖြေ :ဤကဲ့သို့မျိုး နီယသ် မပြုပါနှင့်။ ဒါပေမဲ့ အကယ်၍ အသင် ကဇွာရိုဇာ ရှိတယ်ဆိုရင် ကဇွာ နီယသ်ဖြင့် ရိုဇဟ်ထားပါ။ မရှိလျှင် မွတ်စ်သဟဗ် ရိုဇဟ် နီယသ် ဖြင့် ရိုဇဟ် ထားပါ။
ဤအခြေအနေတွင် ရရှိမည့် အကျိုး အမြတ်မှာ - အကယ်၍ နောက်မှ လမြင်သည့် သတင်းရရှိခဲ့ လျှင်ဤရိုဇာသည်သူ့အလိုလျောက် လမြတ် ရမ်တွာန် ၏ ပထမနေ့၏ ရိုဇဟ် ဟု သတ်မှတ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါမည်။
မေးခွန်း(၄):ကျွန်တော်အနေဖြင့် ကဇွာ (သို့မဟုတ်) မွတ်စ်သဟဗ် နီယသ် ဖြင့် ရိုဇဟ် ထားလိုက်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ နေ့ တွင် လမြင်ကြောင်း၊ဒီနေ့ ဟာ ရမ်တွာန်လမြတ် ၏ ပထမနေ့ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရ ပါသည်။ ဒါဆို ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမည်နည်း ?
အဖြေ:ဟုတ်ပါပြီး ၊မိမိနီယသ် ကို လမြတ်ရမ်တွာန် ၏ ပထမနေ့ ရိုဇဟ် အတွက်ဟု ပြောင်းလိုက်ပါ။ ဒါဆိုလုံလောက်ပါပြီ ။
ရိုဇဟ် ကို ပျက်စေသည့် အရာများ
၂- ဖုန်မှုန့် လည်ချောင်းထိ ရောက်ရှိခြင်း
၃- အလ္လာဟ် ၊ တမန်တော်မြတ်များ () ၊ မအ်စူမီးန် () မမိန့် မပြော သည့် အရာကို မိန့်သည် ပြောသည်ဟု လိမ်ပြောခြင်း
၄- ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံး ကိုရေတွင်နှစ်ခြင်း
၅- တမင်တကာ အန်ခြင်း
၆- Masturbation (ခ) လက်ဖြင့် သုတ်ရည်ထွက်အောင် ပြုခြင်း
၇- ကာမစပ်ယှက်ခြင်း (ခ) မေထုံမှီဝဲခြင်း
၈- ဂျနာဗသ် အခြေအနေဖြင့် ဖဂျရ်အဇါန်ထိအောင်နေခြင်း
၉- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဟိုင်းဇ်(ခ)ရာသီလာခြင်း (သို့) နေဖါစ် (ခ) သားမွေးခြင်း မှသန့်စင် ပြီး ဖဂျရ်အဇါန် မတိုင်မီ အလျင် ဂိုစ်လ် မပြုဘဲနေ ခြင်း
၁၀- အရည်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ဝမ်းချူခြင်း
ရိုဇဟ် ကို ပျက်စေသည့် အရာများ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အချို့ အကျယ်ဖွင့်ဆိုချက်
၁- စားခြင်း၊သောက်ခြင်း • လည်ချောင်းအောက်သို့ရောက်ချိန်
သတိပြုစရာ:တစ်ခုခုကို လျှာပေါ်တင်ပြီး အရသာခံယုံဖြင့် ရိုဇာမပျက် ချေ။
1 သွားကြားညှပ်နေသည့် အချို့ အရာ များကို တမင်တကာ စားမည်ဆိုလျှင် ရိုဇဟ် ပျက်သွားပါသည်။
2 မေ့ပြီး တစ်ခုခု စားမိမည်၊ သောက်မိ မည်ဆို လျှင် ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသည်။
3 တမင်တကာ တံတွေမျိုချမည်ဆိုလျှင် ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသည်။
4 အရသာရှိသည့် စားဖွယ် သောက်ဖွယ် များကို မြင်ပြီး သွားရည်ကြ မည်၊ ပြီး နောက် သွားရည်များကိုတမင်တကာ မျိုချ လိုက်မည်ဆိုလျှင် ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသည်။
5 ချွဲသလိပ် ပါးစပ် တွင် မရောက်မီ မျိုချ မိလျှင်
ချွဲသလိပ် ပါးစပ် တွင် ရောက်ပြီးမှ မျိုချ မိလျှင်
(အာယာ သွလ္လာဟ် စစ်သာနီ)
အဲဟ်သေယာသ်ဝါဂျစ်ဗ် အရ ရိုဇဟ် ပျက် ပါသည်။
(အာယာသွလ္လာဟ်ခူဝီး၊ အာယာ သွလ္လာဟ် အေမာမ် ခိုမေနီ၊ အာယာသွလ္လာဟ် ခါ မေနာအီ)
မေးခွန်း(၁):မစားမသောက်ဘဲ နေရင် အားယုတ်လာပါမည်။ ရိုဇဟ် မထား ဘဲနေလို့ ရပါသလား ?
အဖြေ : မရပါ။
မေးခွန်း(၂):အားတအားယုတ်သွား ပါမည်။ ခံနိုင်ရည်မရှိသည့် အားယုတ် မှုမျိုး ဖြစ်နေပါသည်?
အဖြေ : ဒါဆိုရင် ရိုဇဟ် မထားဘဲနေပါ။ပြီးလျှင်ကဇွာ ပြန်ထားရပါမည်။
၁- ဖျားနေချိန် ဆေးအဖြင့် ထိုးရန် ထိုးခွင့်ရှိပါသည်။
၂- ကိုယ်ခန္ဓာအချို့နေရာကို ထုံဆေး ထိုးဖို့ အတွက် ထိုးခွင့်ရှိပါသည်။
၃-အားပြတ်နေ၍ (သို့) ငတ်မွတ်မှုကို ဖြေ သိမ့်ရန် ဆေးထိုးမည် (အားဆေး သွင်း မည်) ထိုးခွင့်ရှိပါသည်။(ခူဝီး၊စစ်သာနီ)
ဆေးဝါးအဖြင့် ၎င်း ခွင့်ရှိပါသည်။(ခူဝီး၊စစ်သာနီ)
မေးခွန်း(၃): သွားဖုံးမှသွေးထွက်လာပါတယ်။ သတိမပြုမိသဖြင့် မျိုချမိပါ တယ်။ ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသလား? ပျက်ပါသလား?
အဖြေ:အကယ်၍ သတိမပြုမိ သဖြင့် သူအလိုအလျောက် မျိုချမိသွားလျှင် ရိုဇဟ် အတွက် ဘာမှ မဖြစ်ပါ။
မေးခွန်း(၄):သွားဖုံးမှထွက်သည့် သွေး၊တံတွေးနှင့်ရောပြီး ပျောက်သွား ပါ တယ်။ အဲဒီတံတွေးကိုမျိုချခွင့် ရှိပါသလား ?
အဖြေ : ဟုတ်ကဲ့၊ရပါတယ်။ ၎င်းတံတွေးကိုမျိုချလျှင် ရိုဇဟ် မပျက်ပါ။
မေးခွန်း(၅):ကျွန်တော်အရှေ့မှာ ရိုဇဟ် ရှိသူတစ်ယောက်မေ့ပြီး အစား စား နေပါတယ်။ ကျွန်တော်အဖို့သူကိုသွားတားဖို့ အရေးကြီး ပါသလား ?
အာလုပ်ကျင်းပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လည်ချောင်း အောက်ရောက် သွား မည်ဆိုလျှင် ရိုဇဟ် ပျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း(၆):သွားဆရာဝန်အနေဖြင့် လမြတ် ရမ်တွာန် တွင် သွားတပ်ခြင်း ၊ နှင့် အခြား သွားဆိုင်ရာကုသမှုကိုပြုပေးနိုင်ပါသလား ?
ဖြေ : ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်။
မေးခွန်း(၇):သွားကုသမှုခံယူသူ လူနာ အတွက်ကော် ပြဿနာ ရှိပါ သလား?
ဖြေ : အကယ်၍ ရောဂါသည်ကို သွားကုနေချိန် သွေး ၊ရေ သို့မဟုတ် တစ်ခုခု လည်ချောင်းအောက် သို့ မရောက်ဟု စိတ်ချယုံကြည်မှု ရှိမည်ဆို လျှင် ရိုဇာထားလျက်ကုသနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါကခွင့်ပြုချက် မရှိ ချေ။
ပြဿနာ မရှိပါ။ သွားတိုက်ဆေးကိုမမျိုချမိဖို့တော့လိုပါသည်။
သွားကြားထိုးတံ (သို့) သွားရှင်းကြိုး ကို အသုံးပြုခြင်း
သုံးပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ တစ်ခုခုကိုမျိုမချမိဖို့ တစ်နည်းအား ဖြင့်လည်ချောင်း အောက် တစ်ခုခုမရောက်သွားဖို့သာ သတိရှိဖို့ လိုပါတယ်။
မျက်စဉ်း နှင့် နှာခေါင်းထည့်ဆေးရည် ကို အသုံးပြုခြင်း
ဤနေရာတွင်လည်း အရင်မှတ်ကျောက်အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ လည်ချောင်း အောက် မရောက်လျှင် သုံးခွင့် ရှိပါတယ်။
ရေမွှေး နှင့် အမွှေးအကြိုင်များ ကို အသုံးပြု ခြင်း
ရေမွှေး နှင့် အမွှေးအကြိုင်များ ကို သုံခြင်းဖြင့် ရိုဇဟ် ကို မပျက်စေ သည့် အပြင် ရိုဇဟ် ထားသူအတွက် သုံးစွဲ ခြင်းသည် မွတ်စဟစ်ဗ် ဖြစ်ပါ သည်။
ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ဆပ်ပြာ အသုံးပြုခြင်း
ဆံပင်ကို ဆီလိမ်းခြင်း (သို့) CREAM သုံးခြင်း
၎င်းကိုလည်း လည်ချောင်းအောက်မရောက်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဤအတိုင်း ဆို အသုံးပြု ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
လှူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။အကယ်၍အားယုတ်မှုကိုဖြစ်စေမည်ဆိုလျှင် မက်ကရူ ဖြစ်ပါတယ်။ဟရာမ်တော့မဟုတ်ပါ။
သတိ။ ။ (အစ္စလာမ့်ကို ထိခိုက်အကျိုးယုတ်စေမည့်သူများကိုသွေးလှူခြင်း ကို အာယာသွလ္လာဟ် ခါမေနာအီ ရုံးမှတားမြစ်ထားပါသည်။ မြန်မာဘာ သာပြန်ဆိုသူ)
အာလုပ်ကျင်းနေရင်း အလိုအလျောက် လည်ချောင်းအောက် ရေ ရောက် သွား လျှင် ရိုဇဟ် ပျက်ပါသည်။ ဤအချက်ဆိုလျှင် ပိုင်ပါတယ်။
ရိုဇဟ် ရှိသည်ဆိုတာ မေ့သွားချိန်
ဖုန်မှုန့် ထူထူ လည်ချောင်း အထိ ရာက်သွားမည်ဆိုလျှင် ရိုဇဟ် ပျက်ပါ သည်။
မည်သည့်အရာ ဝတ္ထု၏ အမှုန့် ဖြစ်နေပါစေ ။
⌠ဥပမာ စားလို့ပိုင်သည့် အမှုန့် မျိုး ၊သာဓက အားဖြင့် ဂျုံမှုန့် ဖြစ်ပါ သည်။
⌠သို့မဟုတ် စားလို့မပိုင်သည့် အမှုန့်မျိုး ၊သာဓက အားဖြင့် မြေမှုန့် ဖြစ်ပါ သည်။
မေးခွန်း(၁):ဖုန်မှုန့် တော့ဖုန်မှုန့်ပါပဲ၊ဒါပေမဲ့ မထူပါဘူး၊ဤဖုန်မှုန့် လည် ချောင်းထိ ရောက်သွားရင် ရိုဇဟ် ပျက်သွားပါသလား ?
အဖြေ : မပျက်ပါ။ (အာယာသွလ္လာဟ် အေမာမ်ခိုမေနီ၊ အာယာသွလ္လာဟ် စစ်သာနီ ၊ အာယာသွလ္လာဟ် ခါမေနာအီ)
အဲဟ်သေယာသ် ဝါဂျစ်ဗ်အရ ရိုဇဟ်ပျက်ပါသည်။ (အာယာသွလ္လာဟ်ခူဝီး)
သတိ :ဤအခြေအနေများတွင် ရိုဇဟ် မပျက်ပါ။
(1) ဖုန်မှုန့် လည်ချောင်း အထိ မရောက်လျှင် ( ပါးစပ် အတွင်းဝင်ယုံသာ)
(2) တမင်တကာ ရောက်အောင်မပို့ လျှင်
(4) ဖုန်မှုန့် လည်ချောင်းအထိရောက်၊ မရောက် သံသယဖြစ်လျှင်
မေးခွန်း(၂):ကျွန်တော်ဂျုံကြိတ်စက်မှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဂျုံမှုန့် ထူထူ ကျွန်တော် လည်ချောင်း အထိ ရောက်ပါတယ်။ကျွန်တော် ရိုဇဟ် ထား လျက် ဤအလုပ်ကို လုပ်ခွင့် ရှိပါသလား ?
အဖြေ: အမှုန့် လည်ချောင်း အထိမရောက်အောင် mask (ခ) မျက်နှာဖုံး (သို့) ၎င်းကဲ့သို့ အရာတစ်ခုခု ကို သုံးပြီး အလုပ်လုပ်ပါ။ ဤသို့ မဟုတ် လျှင် ရိုဇဟ် ပျက်သွားပါမည်။
စီးကရက် နှင့် စသည်ဖြင့် သုံးစွဲခြင်း
စီးကရက် ၊ ဆေးပြင်းလိပ် ၊ huqqa ၊ ဆေးတံ ၎င်းကဲသို့ အရာများ ကို အသုံးပြု ခြင်း ဖြင့် ရိုဇဟ် ပျက်ပါသည်။
မေးခွန်း(၃):ကျွန်တော် ပန်းနာ ရောဂါသည် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှူဆေးဘူး မသုံးလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရိုဇဟ် ပျက်ပါသလား ?
အဖြေ:• မပျက်ပါ။ ဤအခြေအနေမှာ ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသည်။ (အာယာ သွလ္လာဟ် အေမာမ် ခိုမေနီ၊ အာယာသွလ္လာဟ်ခူဝီး၊ အာယာသွလ္လာဟ် စစ်သာနီ)
အကယ်၍ ရှူဆေးဘူး (သို့မဟုတ်) spray မသုံးပဲ ရမ်တွာန်လမြတ် ပြီးနောက် ရိုဇာ ထားနိုင်လျှင် အဲဟ်သေယာသ်ဝါဂျစ်ဗ် အရ ရိုဇဟ် ကဇွာ ထားရပါမည်။ (အာယာသွလ္လာဟ် ခါ မေနာအီ)
ခေါင်း နှင့်ရင်ပတ်တွင် ပရုတ်ဆီ လိမ်းခြင်း
ပြဿနာမရှိပါ။ ရိုဇဟ် ပိုင်ပါတယ်။
ရေခိုးရေနွေးငွေ့ ကို အသုံးပြုခြင်း
မေးခွန်း(၄): ရောဂါကုသရန်အတွက် ရေခိုးရေနွေးငွေ့ ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရိုဇဟ် ပျက်ပါသလား ?
အဖြေ:• အားပြင်းသည့် အငွေ့ လည်ချောင်း အောက် မရောက်သွားဖို့လိုပါ သည်။
အကယ်၍ ဤအငွေ့ ပါးစပ် အတွင်း စုပြီး ရေအသွင် ဆောင်သွားလျှင် မျိုချခွင့် မရှိပါ။
ရေပူကြောင့် ရေချိုးခန်း တွင် ဖြစ်သည့် ရေခိုးအငွေ့
ဤကဲ့သို့သော် ရေခိုး၊ရေငွေ့သည် အသက်ရှူရင်း ဝင်သွားမည်ဆို လျှင်မည် သည့် ပြဿနာ မှ မရှိပါ။
ဘတ်စ်ကားများ နှင့် ကားများ ၏ မီးခိုး
အကယ်၍ ဤကဲ့သို့ မီးခိုး လည်ချောင်း အထိမရောက်ဟု ယုံကြည် မည် ပြီးနောက်ရုတ်တရက် လည်ချောင်း အထိ ရောက်သွားလျှင် ပြဿနာ မရှိပါ။ ရိုဇဟ်ပိုင်ပါသည်။
ရိုဇဟ် ရှိသည်ဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) မရှိသည်ဖြစ်စေ
(1) လိမ်ပြော၊မုသားဆိုခြင်းသည် ဟရာမ် ဖြစ်၏။
(2) တစ်ဦးတစ်ယောက်မပြောသည်ကို ပြောသည်ဟု လိမ်ပြောခြင်းသည် လည်း ဟရာမ် ဖြစ်၏။
(3) မအ်စူမီးန် () မှတစ်ပါးပါး ကို မပြောသည်ကို ပြောသည် ဟု လိမ်ပြောခြင်းသည် ပို၍ အပြစ်ကြီးပါသည်။
မေးခွန်း(၁): ၎င်းတို့ အထဲ မှ မည်သူဖက် မှမပြောသည်ကို ပြောသည်ဟု လိမ်ပြော မိလျှင်ရိုဇဟ် ပျက်ပါ သနည်း ?
မပြောဘဲ ပြောသည်ဟု လိမ်ပြော
လျှင် ၎င်း၏ ရိုဇဟ်ပျက်ပါသည်။
နှုတ်ဖြင့် ပြောခြင်း ၊ သီးကုံး ခြင်း ၊အမူအရာ ပြုခြင်း ၊တစ်ဦးတစ် ယောက် ၏ မေးခွန်း ကို ဖြေဆိုရာတွင် ၊ SMS / Email (သို့) Forward ပြုခြင်း ၊ တစ်ယောက်ယောက် လိမ်ပြော တာကို ထောက်ခံ ပေးခြင်း စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
တမင်တကာ မပြောသည်ကို ပြောသည်ဟု ဆိုလျှင် ရိုဇဟ် ပျက်ပါသည်။
အမှန်ထင်ပြီး ဆင့်ပြန်လေ၏။ပြီးမှာ မုသားဖြစ်ကြောင်း သိလျှင် ရိုဇဟ် မပျက်ပါ။
မှန်လား၊မုသားလား မသိသည့် အရာ ကိုတင်ပြလျှင် အကိုး၊အကားနှင့် တစ်ကွ တင်ပြရပါမည်။
မေးခွန်း(၂):ရိုဇဟ်ထားရင် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် သေလာဝသ်လုပ် ပါသည်။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ကေရအသ် မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်တော် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ မိန့်ရပ်တွေကို မှားအောင်ပြုဖို့ မည်သည့် မကောင်း သည့်ရည်ရွယ်ချက်မျှမရှိပါဘူး ။ ကျွန်တော်နီယသ် ကတော့ စဝါးဗ် ရယူဖို့ အတွက်ပါ။ ဒါဆို ကျွန်တော်ရိုဇဟ် ပျက်ပါသလား?
ဖြေ : မပျက်ပါ။ သို့သော် ကေရာအသ် ကောင်းဖို့ ကြိုးစားရပါလိမ့်မည်။
တမင်တကာ ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံးကို ရေတွင်နှစ်ခြင်းဖြင့် ရိုဇာဟ် ပျက် သွားသည်။
သတိ : အောက်ဖော်ပြပါ အနေအထားဆိုလျှင် ရိုဇဟ် မပျက်ပါ။
(1) မေ့ပြီး လုပ်မိလျှင်
(2) ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံးကို မနှစ်ဘဲ အချို့ ကိုသာ နှစ် လျှင်
(3) ခေါင်းတစ်ခြမ်းကို တစ်ကြိမ် နောက်တစ်ခြမ်းကို နောက်တစ်ကြိမ် နှစ် လျှင်
(4) အလိုလို အမှတ်တမဲ့ ရေထဲ ပြုတ်ကြပြီး ခေါင်းတစ်ခုလုံး နှစ်သွားလျှင်
(5) တစ်ယောက်ယောက် မှ အတင်းအဓမ္မ ရေထဲဆွဲ နှစ်လျှင်
(6) ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံး ရေနှစ် မိလား မနှစ်မိဘူးလားဟု သံသယဖြစ်လျှင်
(7) ထိုနည်းတူစွာ ရေပိုက် (သို့) ရေပန်းအောက်တွင် ခေါင်းကို ဆေးခြင်း ဖြင့်လည်း ရိုဇာဟ် မပျက်ပါ။
ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ပြီး ခေါင်းကို ဖုံးထားမည် ဤအခြေအနေများ
Swimming cap ဝတ်ပြီးရေ အောက် သွားမည်
ရှင်းလင်းချက်: အာယာသွလ္လာဟ် စစ်သာနီ ၏ အမြင်တွင် ရိုဇဟ် ထားပြီး ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံးကို ရေနှစ်ခြင်းသည် ပြင်းထန်သည့် မက်ရူးဟ် ဖြစ်ပါ သည်။ဆိုလိုသည်မှာ စဝါးဗ် နည်းသွားမည်။ သို့သော် ဟရာမ် လည်း မဟုတ်သလို ရိုဇဟ်လည်း မပျက်ချေ။
တမင်တကာ အန်ခြင်းဖြင့် ရိုဇဟ် ပျက်သွားပါသည်။ ယုတ်စွ ဖျားနာခြင်း ကြောင့် မတတ်နိုင်သည့် အဆုံးအန်ရသည်ပင် ဖြစ်ပါစေ။အလိုလို အမှတ် တမဲ့ အန်မိလျှင် ရိုဇဟ် မပျက်ပါ။
အကယ်၍ ရိုဇဟ်ထား တာ မေ့ပြီး အန်မိလျှင် ရိုဇဟ် မပျက်ပါ။
မေးခွန်း(၁): ရိုဇဟ်ရှိနေစဉ် တမင်တကာ လေတက် လို့ရပါသလား ?
ဖြေ: ရပါသည်။ သို့သော် အကယ်၍ပါးစပ်အတွင်း အရာတစ်ခုခု ထွက်လာ လျှင် တမင်တကာ ပြန် မျိုချ၍ မရပါ။
မေးခွန်း(၁): ဘာကိုရည်ရွယ် ပါသလဲ ?
ဖြေ: ကာမစပ်ယှက်မှုမှ အပ မိမိ၏သုတ်ရည် ထွက်လာအောင် မိမိ ကိုယ် မိမိ ပြုလုပ်ခြင်း ကို ဆိုလိုပါသည်။
မှတ်စရာ : ဤနေရာတွင်အရာ တစ်ခုခု (သို့) တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အကူ အညီ ကြောင့်ဆိုတာ အဓိက မကြပါ။
သတိပြုန်ရန် : ရိုဇဟ်မရှိလျှင်လည်း ဤလုပ်ရပ်သည် ဟရာမ် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ခင်ပွန်းနှင်ဇနီး ကိစ္စတော့ ကွာပါသည်။
ဤလုပ်ရပ်ကြောင့် ဂိုစ်လ်လေ ဂျနာဗသ် ပါ ပြုရပါမည်။
ရိုဇဟ် ရှိနေစဉ် ဤလုပ်ရပ်ကြောင့် ရိုဇဟ် ပျက်သွားပါသည်။ ယုတ်စွ ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီး အချင်းချင်း မေတ္တာမျှကြရင်း၏ ရလာဒ်ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေ။
မေးခွန်း(၂): နာမဲဟ်ရာမ် ကိုကြည့်ခြင်း ဖြင့် ရိုဇဟ် ပျက်ပါသလား?
ဖြေ: ဟရာမ် အကြည့် သည် မည်သို့ ပင်ဆိုစေ ဟရာမ် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကြည့်ယုံဖြင့် ရိုဇဟ် မပျက်ပါ။
မေးခွန်း(၃):ကိလေသာစိတ်၊ ကာမ၊ရာဂ စိတ်ကိုနိုးထစေသည့် ရုပ်ရှင် များ ကိုကြည့် လျှင် ရိုဇဟ် ပျက်ပါသလား ?
ဖြေ: • ဤကဲ့သို့သော် ရုပ်ရှင်များကို ဘယ်အခြေအနေတွင် ကြည့်ကြည့်
ဟရာမ် ဖြစ်ပါသည်။ယုတ်စွ လမြတ်ရမ်တွာန် ဖြစ်ပါစေ (သို့) အခြား
Masturbation ဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကြည့်မည်၊ပြီးနောက်သုတ်ရည်
မေးခွန်း(၄):ရိုဇဟ်ရှိနေစဉ် အလိုလို အမှတ်တမဲ့ သုတ်ရည် ထွက် လာ မည်။ ဥပမာ အိပ်ပျော်နေစဉ် ထွက်လာမည် ဆိုလျှင် ရိုဇဟ် ပျက်ပါသ လား?
အဖြေ : မပျက်ပါ။
မေးခွန်း(၅): ဤအခြေနေတွင် ရိုဇဟ်သမား အတွက် ချက်ချင်း ဂိုစ်လ် ပြုရန် အရေး ကြီးပါသလား?
ဖြေ: • မပျက်
နမာဇ် ဝတ်ပြုဖို့ ဂိုစ်လ် လုပ်ရပါမည်
သို့သော် အမြန် ဂိုစ်လ် လုပ်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။
မေးခွန်း(၆): ရိုဇဟ်သမားကို အိပ်လျှင် သုတ်ရည်ထွက်မည် ဆိုတာ သိ နေပါ သည်။ ဒါလည်းပဲ အိပ် ခွင့်ရှိပါသလား ?
ဖြေ : ဟုတ်ကဲ့၊ အိပ်ခွင့် ရှိပါသည်။
ဤလုပ်ရပ်ကြောင့် လည်း ရိုဇဟ် ပျက်ပါတယ်။သုတ်ရည်ထွက် သည် ဖြစ်စေ ၊မထွက်သည်ဖြစ်စေ ။
ကာမစပ်ယှက်ခြင်းမှ အပဇနှီးမောင်နှံ တစ်ဦးနှင့်၊တစ်ဦး အခြား အရသာ များကို ခံစားရာတွင် ပြဿနာ မရှိပါ။
သုတ်ရည်မှအပ အခြားအရည်များ ထွက်ပါသည်။ထိုအရည်များ ကြောင့် ရိုဇဟ် မပျက်ပါ။
မေးခွန်း(၁):ခင်ပွန်းသည် ရိုဇဟ်မထားပါ။သို့သော် ဇနီးသည် ဝါဂျစ်ဗ် ရိုဇဟ် နှင့်ပါ။ ခင်ပွန်းသည်မှ ဇနီးသည်ကို ကာမစက်ယှက်ရန် အတင်း လုပ်ခိုင်း၍ ရပါသလား?
ဖြေ : မရပါ။
မေးခွန်း(၂): လတ်တလော အိမ်ထောင်သည် ဇနီးမောင်နှံ ပါ။ ရမ်တွာန် လမြတ် တွင် honeymoon ခရီး အတွက် နိုင်ငံခြား ခရီးထွက်ခဲ့ ပါ သည်။နေ့တွင် ကာမ စပ်ယှက်ခွင့် ရှိပါသလား ?
အဖြေ : • အကယ်၍ ခရီးစဉ် ၁၀ ရက်ထက်နည်းမည်ဆိုလျှင် ခရီးသည်
ဆိုင်ရာ အဲဟ်ကမ် ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆိုလိုသည်မှာ
ရိုဇဟ် ထားရန်မလိုပါ။ ဤအခြေအနေတွင်နေ့ ၌ကာမစပ် ယှက်
ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ သို့သော် မက်ရူးဟ် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ ခရီးစဉ် ၁၀ ရက် (သို့) ၎င်းထက်ပိုများ မည်ဆိုလျှင်
ရိုဇဟ်ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသည်။ ကာမစပ် ယှက်ခြင်း ဟရာမ်
ဂျနာဗသ် ဖြစ်ပြီးနောက် အကယ်၍ ဖဂျရ် အဇါန် မတိုင်မီ ဂိုစ်လ် မပြု မည် (သို့) အကယ်၍ သယမွန်မ် ပြုရမည်တာဝန် ရှိပြီး သယမွန်မ် မပြု လျှင် အချို့ အခြေအနေများ တွင် ၎င်း၏ ရိုဇဟ် ပျက်သွားပါသည်။
အကယ်၍ တမင်တကာ ဂိုစ်လ် / သယမွန်မ် မပြုသည်ဆိုလျှင် အကယ်၍
⌠ရမ်တွာန်လမြတ် ၏ရိုဇဟ် ဆိုလျှင်
(သို့မဟုတ်) ရိုဇာမပိုင်ချေ ။
⌠ရမ်တွန်လမြတ်၏ ကဇွာရိုဇဟ် ဆိုလျှင်
⌠မွတ်စ်သဟဗ် ရိုဇဟ်ဆို လျှင် : ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသည်။
မေးခွန်း(၁):အကယ်၍ တစ်ဦး တစ်ယောက် အနေဖြင့် လမြတ် ရမ်တွာန် တွင် ဂိုစ်လ်လေဂျနာဗသ် ပြုရန် မေ့သွားမည်။ရက်အနည်း ငယ်ကြာမှ သတိ ပြန်ရလာလျှင် ဘာလုပ်ရမည်နည်း ?
အဖြေ : (ထိုနေ့မှစ၍ သတိရသည့်နေ့အထိ)
မေးခွန်း(၂): လမြတ်ရမ်တွာန် ဖြစ်၏။ ဇိုက် ဂိုစ်လ်လေဂျနာဗသ် လုပ်ရပါ မည်။ အကယ်၍ အိပ်မည်ဆိုလျှင် ဖဂျရ်အဇါန် မတိုင်ခင် နိုးမည် မဟုတ် ချေ။ အိပ်လို့ ရပါသလား?
ဖြေ: • အိပ်မရပါ။ ပထမဆုံး ဂိုစ်လ်လေ ဂျနာဗသ် ပြုရပါမည်။ ပြီးနောက်
အကယ်၍ ဂိုစ်လ်လေ ဂျနာဗသ် မပြုဘဲ အိပ်ပျော်သွားမည်။ ဖဂျရ်
နမာဇ် ပြီးမှ နိုးမည်ဆိုလျှင် ၎င်း ၏ ရိုဇဟ် မပိုင်ချေ။
မေးခွန်း(၃):လမြတ်ရမ်တွာန်၏ ညဖြစ်ပါတယ်။ ဇိုက် ဂိုစ်လ်လေဂျနာဗသ် လုပ်ဖို့မလိုပါ။အိပ်ပျော် သွားပါသည်။ မျက်စိပွင့်တော့ ဖဂျရ် အဇါန် ပေးပြီး သွားပါပြီး။ အိပ်ပျော်နေစဉ် သုတ်ရည်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။အဇါန်မတိုင်ခင် ထွက်တာလား ၊ပေးပြီးလားဆိုတာ မသိပါ။ ဤအတွက် ဘာအမိန့် ရှိပါ သ လဲ?
ဖြေ : အဇါန်မတိုင်ခင် ထွက်သည်ဖြစ်စေ ၊ပေးပြီးထွက်သည်ဖြစ်စေ ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသည်။
မေးခွန်း(၄): တမင်တကာ ဂိုစ်လ် ပြုဖို့ အချိန် ဆွဲရင်း ဖဂျရ်အဇါန် အချိန် အလွန်နီး ကပ်နေပါပြီး၊ဂိုစ်လ်ပြုဖို့ အချိန်မရှိတော့ပါ။ ဘာလုပ်ရမည်နည်း?
ဖြေ :၎င်းအနေဖြင့် ဂိုနာ ပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သယမွန်မ် လုပ်ပြီး ရိုဇဟ်ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်း(၅): ဤသယမွန်မ် ဖြင့် ဖဂျရ်နမာဇ်ကော် ဝတ်ပြုလို့ ရပါသလား ?
အဖြေ :မရပါ။ ရေရှိနေပြီး အချိန်လည်း ရှိနေသည့်အတွက် ဂိုစ်လ်ပြုဖို့ အရေး ကြီးပါသည်။
ဂိုစ်လ်လေ မတ်စ်စေမယသ် နှင့် ရိုဇဟ်
ဂိုစ်လ်လေမတ်စ်စေမယသ် ဆိုသည်မှာ မယသ် ကို ထိမိ သည့် အတွက် ကြောင့် ပြုရမည့် ဝါဂျစ်ဗ် ဂိုစ်လ် ကိုခေါ်ပါသည်။
တစ်ဦးတစ်ယောက် အပေါ် ဂိုစ်လ်လေမတ်စ်စေမယသ် ပြုရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ် နေချိန်တွင် လည်း ရိုဇဟ်ထားနိုင်ပါသည်။
နမာဇ်အတွက်တော့ ဂိုစ်လ်လေမတ်စ်စေမယသ် ပြုရန် အရေး ကြီးပါသည်။
၉- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဟိုင်းဇ်(ခ)ရာသီလာခြင်း (သို့) နေဖါစ် (ခ) သားမွေးခြင်း မှသန့်စင် ပြီး ဖဂျရ်အဇါန် မတိုင်မီ အလျင် ဂိုစ်လ်မပြုဘဲ နေခြင်း
အကယ်၍ မည်သည့် အမျိုးသမီး မဆို ဖဂျရ်အဇါန် မတိုင်မီ ဟိုင်းဇ် (သို့) နေဖါစ် မှ သန့်စင် သွားပြီး ဆိုလျှင် ၎င်း အတွက် အရေးကြီး ပါသည်။
(က) • ဖဂျရ်အဇါန် မတိုင်မီ အလျင် ဂိုစ်လ် ပြုရပါမည်။
(ခ) ထိုနေ့ တွင် ရိုဇဟ် ထားရပါမည်။
မေးခွန်း(၁):ဤသယမွန်မ် ဖြင့် ဖဂျရ် နမာဇ် ဝတ်ပြုလို့ ရပါသလား ?
ဖြေ :မရပါ။ ရေဖြင့် ဂိုစ်လ်ပြုရန် လိုပါသည်။
မေးခွန်း(၂): အကယ်သာမွန်မ် မလုပ်ဘူး ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသလား ?
အဖြေ : ရိုဇဟ်မပိုင်ပါ။ လမြတ်ရမ်တွာန် နှင့် ကဇွာ ရိုဇဟ် မမြောက်ပါ။ မွတ်စ်သဟဗ် ရိုဇဟ် သယမွန်မ် မရှိလျှင်လည်း ပိုင်ပါသည်။
မေးခွန်း(၃): အကယ်၍ အမျိုးသမီး တစ်ဦးအနေဖြင့် နေ့တွင် မည်သည့် အချိန် မဆို သန့်စင် သွားမည်ဆိုလျှင် ဘာလုပ်ရမည်နည်း?
အဖြေ: ထိုနေ့၏ရိုဇဟ် ထားခွင့် မရှိပါ။ နောက်ပိုင်းတွင်ကဇွာ ထားရပါ မည်။
မေးခွန်း(၄):အကယ် ၍ ရိုဇဟ် ထားနေရင်း ဟိုင်းဇ်(သို့) နေဖါစ် စလာပြီး ဆိုလျှင် ဘာလုပ်ရမည်နည်း?
အဖြေ: ရိုဇဟ်မပိုင်ချေ။ ယုတ်စွ မဂ်ရိဗ် အချိန် အလွန် နီးကပ်နေသည် ဖြစ် ပါစေ၊ဤရိုဇဟ် အတွက် ကဇွာ ပြန်ထားရပါမည်။ ဤသို့ဖြစ်လာလျှင် ထို အမျိုးသမီး သည် မည်သည့် ဂိုနာ မျှ မထိုက်ပါ။
မေးခွန်း(၅):အမျိုးသမီးအနေဖြင့် ဖဂျရ်အဇါန် အတိုင်မီ သန့်စင်သွား မည်။ သို့သော် ဂိုစ်လ်ပြုရန် နှင့် သယမွန်မ် ပြုရန် အချိန်မရှိတော့ ချေ။ဤ အခြေ အနေတွင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း ?
ဖြေ: ဤအခြေအနေတွင် ဂိုစ်လ် နှင့် သယမွန်မ် မပြုလည်းပဲ ရိုဇဟ် ပိုင်ပါ သည်။
မေးခွန်း(၆):ဖဂျရ်အဇါန် ပြီးမှ အဇါန် မတိုင်ခင်ကတည်းက သန့်စင်သွား တာ ဖြစ်ကြောင်း သိလျှင် ဘာလုပ်ရမည်နည်း ?
အဖြေ : သိသည့်အချိန် အထိ ရိုဇဟ် ကို ပျက်စေသည့် အရာများ တစ်ခု မှ မလုပ်ရသေးလျှင် ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသည်။ ဤသို့မဟုတ်လျှင် ရိုဇဟ် ပျက် ပေ သည်။ပြီးနောက် ကဇွာ ပြန်ထားရပါမည်။
မေးခွန်း(၇): မိမိ ရာသီလာခြင်းကို ပြောင်းလဲရန် အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ဆေးပြားများ စသည်ဖြင့် သုံးစွဲ ခွင့် ရှိပါသလား?
အဖြေ : ၎င်းအတွက် အန္တရာယ် မဖြစ်လျှင် သုံး နိုင်ပါသည်။
အစ်သေဟာဇေဟ် နှင့် ရိုဇဟ်
ဤအခြေအနေတွင် အမျိုးသမီး အနေဖြင့် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်စေမည့် ဂိုစ်လ် အား လုံး ကို ပြုမည်ဆိုလျှင် ၎င်း၏ ရိုဇဟ် လုံးဝ ပိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ ဤ ကိစ္စအတွက် အကျယ်တဝင့် သောင်ဇီးဟိုလ် မစာ
အေလ်ကျမ်း တွင် ရှိပါသည်။ (လေ့လာနိုင်ပါသည်။)
( နီးစပ်ရာမောင်လာနာများ နှင့် ဇာကေရဟ်များ ထံလည်း
မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။ ဘာသာပြန်ဆိုသူ)
ဝမ်းချူခြင်း - ဆိုလိုသည်မှာ ဝမ်းချုပ်မှုကို ဖြေရှင်းရန် စအိုပေါက် နေရာ တွင် ဆေးဝါး ထည့်ခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ ဤဆေးဝါးသည် အခဲလည်း ရှိ သလို အရည် လည်း ရှိပါသည်။
ဖျားနေသည့်အတွက်ကြောင့် မလွဲမရှောင် သုံးရသည် အခြေအနေ တွင် လည်း အရည်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ဝမ်းချူ ခြင်းသည် ရိုဇဟ်ကို ပျက်စေ ပါသည်။
သတိပြုရန်: ဆေးအခဲ တစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဝမ်းချူလျှင် ရိုဇဟ် မပျက်ချေ။
၁- ရိုဇဟ်ကို ပျက်စေသည့် အရာများ မှ တစ်ခုခုကိုမေ့ပြီး ပြုမိလျှင် ရိုဇဟ် မပျက်ချေ။
၂- အကယ်၍ မေ့ပြီး ရိုဇဟ် ကို ပျက်စေသည့် အရာတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်မည် ၊ပြီးနောက် ရိုဇဟ်တော့ပျက်သွားပြီးပဲဆိုပြီး တမင်တကာ စားမည် သောက် မည် (သို့) ရိုဇဟ် ကို ပျက်စေသည့် အလုပ်တစ်ခုခု ပြု လုပ် မည်ဆိုလျှင် ရိုဇဟ် ပျက်သွားပေမည်။
၃- အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ အတင်းအဓမ္မ လုပ်မည်။ ဥပမာ - တစ်ဦး တစ်ယောက်ကို အတင်း အဓမ္မတစ်ခုခု ကျွေးမည် (သို့) အတင်း အဓမ္မ ရေထဲ သို့တွန်းချမည်၊ပြီးနောက် ခေါင်းတစ်ခုလုံး နှစ်သွား မည်ဆို လျှင် ရိုဇဟ် မပျက်ချေ။
ရိုဇဟ်ထားသူကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ အတင်းအဓမ္မခိုင်းမည်။ ဥပမာ ထမင်း စားပါ မစားရင် သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် သည့်အခါ ၊ ရိုဇဟ် ထားသူအနေဖြင့် သေနတ်၏ ကျည်တောင့် စားမည့်အစား မိမိ လက်ဖြင့် ထမင်းစားမည် ဆိုလျှင် ၎င်းအနေဖြင့် လုံးဝ မှန်သည့် အလုပ်ကို လုပ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် ဂိုနာ မျှ မထိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ရိုဇဟ် ပျက်သွားပါသည်။ ဤ အတွက်နောက်မှ ကဇွာ ပြန် ထားရပါမည်။
သတိပြုရန်: အကယ်၍ ရမ်တွာန်လမြတ် တွင် မည်သည့် (ရှရီအီ) ခိုင်လုံ သည့် အကြောင်းပြချက် မရှိဘဲ ရိုဇဟ် ကို ဖျက်လိုက် မည်ဆိုလျှင် မဂ်ရိဗ် အချိန် အထိ စားရန် သောက်ရန် ခွင့်မရှိချေ။ ရိုဇဟ် ကိုပျက်စေ သည့် အခြား မည်သည့် အလုပ်ကိုမျှ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိပေ။
လမြတ်ရမ်တွာန် တွင် ရိုဇဟ် မထားသည့် အတွက် ကဖ်္ဖရဟ်
တမင်တကာ လမြတ်ရမ်တွာန် တွင် ရိုဇဟ် မထားမည် (သို့) ဖျက် လိုက်မည်ဆိုလျှင် ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ဒဏ်ကြေး ကို ကဖ်္ဖရဟ် ဟုခေါ် ပါသည်။
မေးခွန်း (၁) : ကဖ်္ဖရဟ် အတွက် ဘာလုပ်ရပါသနည်း?
အဖြေ : (က)ငွေဝယ် ကျေးကျွန်တစ်ယောက်ကို လွတ်ပေးရပါသည်။
(ခ)ရက်ပေါင်း ၆၀ ရိုဇဟ်ထားရပါမည်။ ၃၁ရက် ဆက်တိုက်ထား
(ဂ)မရှိဆင်းရဲသား မိုအ်မင် အယောက်၆၀ကိုထမင်းကျွေးရမည်။
သတိပြုရန်:အကယ်၍ရိုဇဟ်ကို ဟရာမ် ပစ္စည်း တစ်ခုခုနှင့် ဖျက်လိုက်မည် ဆိုလျှင် ဥပမာ အရက်သေစာ သောက်စားပြီး ၊ဇေနာပြုပြီး ဆိုလျှင် ကဖ်္ဖရဟ် သုံးမျိုး စလုံး ၎င်းအတွက် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပေသည်။
မေးခွန်း(၂):ယခုခေတ်ပါ ရှရီအသ်ပြောသည့် ငွေဝယ်ကျေးကျွန် မရနိုင် တော့ ပါ၊ဘာလုပ်ရမည်နည်း?
အဖြေ: မှန်ပါတယ်။ ဤအတွက်ကြောင့် ရွေးပိုင်ခွင့် နှစ်ခုသာကျန်တော့ မည် ဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်း(၃): မရှိဆင်းရဲသား အယောက်၆၀ ကို ထမင်းကျွေး ရမည်ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည်း ?
အဖြေ : (က) ထမင်း ချက်ပြုတ်ပြီး မရှိဆင်းရဲသား အယောက် ၆၀ကိုဗိုက်
အဝ ထမင်းကျွေး ရမည်။
(ခ) မရှိဆင်းရဲသားအယောက် ၆၀ကို ၇၅၀ ဂရမ် တစ်နည်းအား
ဖြင့် ၃ပေါင်ခန့်ဂျုံမှုန် (သို့) ဆန် ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
သတိပြုရန် : • ထိုမရှိဆင်းရဲသားများကို ငွေပေး၍ မရပါ။
အကယ်၍ ငွေ ပေးမည်ဆိုလျှင်လည်း ၎င်းတို့ကို ဂျုံမှုန်
(သို့)ဆန်ဝယ်ဖို့ အတွက်သာ ပေးကြောင်း ပြောရပေ မည်။
၎င်းပြောသည့် အတိုင်း လုပ်မည်ဆိုတာကိုလည်း စိတ်ချ ဖို့
မေးခွန်း(၄): အယောက် ၆၀ ပြည့်ဖို့ အရေးကြီးပါသလား ? ဆင်းရဲသား တစ်ယောက်တည်း ကို အယောက် ၆၀ အတွက် ကဖ်္ဖရဟ် ပေးလိုက်လျှင် ရော တာဝန် ကျေပါသလား ?
အဖြေ : မရပါ။ အယောက် ၆၀ ပြည့်ရန် အရေးကြီး ပါသည်။
မေးခွန်း(၅): ကဖ်္ဖရဟ် ဘယ်အချိန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသလဲ?
အဖြေ : ရိုဇဟ် မထားသည့် အခါ (သို့) ထားပြီး ဖျက်လိုက်သည့်အခါ
⌠တမင်တကာ လုပ်လျှင် ကဇွာလည်း ပြုရမည်။
⌠မိမိသဘောအရ မိမိ ပြုလုပ်လျှင် ၊
မည်သူကမျှ အတင်းအဓမ္မ မပြုလျှင်
⌠မည်သည့် ခိုင်လုံသည့် ရှရီအီအကြောင်း
ပြချက်မရှိဘဲ ၊ဥပမာ ရောဂါ စသည်ဖြင့် ကဖ်္ဖရဟ်လည်းပေးရမည်။
သတိပြုရန်:ဤလုပ်ရပ်(တမင်တကာရိုဇဟ်မထားခြင်းနှင့် ရိုဇဟ် ဖျက် ခြင်း) ကိုလုပ်လျှင် ရိုဇဟ်ကို ပျက်စေသည်ဆိုသည့် အသိမရှိ လျှင် လည်း ရိုဇဟ် ပျက်ပါသည်။ ပြီးမှရိုဇဟ်ပြန်ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါ သည်။
သို့သော် ကဖ်္ဖရဟ် ဝါဂျစ်ဗ် မဖြစ်တာအောက်ဖော်ပြ အခြေအနေမှာအပ - အခြေအနေ နှစ်ရပ်တွင် ရိုဇဟ်လည်းပျက်ပါသည်။ကဇွာ အပြင်ကဖ်္ဖရဟ် လည်း ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
⌠မဇ်အလေကို နားလည်ဖို့ မကြိုးစားခဲ့ပါ။ ရိုဇဟ်ကိုပျက်စေတဲ့ အလုပ် တွေကို လုပ်သည့်အချိန် ဤအရာတွေလုပ်ရင် ရိုဇဟ် ပျက်ကြောင်းအ နည်း ငယ်ဖြစ်ဖြစ် သိနေ၏။
⌠အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်နှင့် ၊ မအ်စူမီးန် () မပြောသည့် စကားတစ် ခုခုကို ပြောသည်ဟု လိမ်ပြောခြင်း ၊ ဤကဲ့သို့လုပ်လျှင် ရိုဇဟ်ပျက် ကြောင်း အသိမရှိချေ။
ဤကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်သည့် အချို့ ဥပဒေသများ
၁-တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ရိုဇဟ်ကို ပျက်စေသည့်အရာများမှ တစ်ခုခုကို ပြုလုပ် လေ၏။ ရိုဇဟ်ပျက်သွားလေ၏။ကဖ်္ဖရဟ်ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်သွားပါပြီ ။
မေးခွန်း(၁):အကယ်၍ နောက်တဖန် ရိုဇဟ်ကို ပျက်စေသည့်အရာများမှ တစ်ခုခုကို ပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် ကဖ်္ဖရဟ် နှစ်ဆ (double ) ဖြစ်သွား ပါ သလား?
ဖြေ:ကာမစပ်ယှက်မှုမှ အပ မဖြစ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ကာမ စပ်ယှက်သည့် အကြိမ် အရေအတွက် နှင့်အညီ ကဖ်္ဖရဟ် အရေအတွက်လည်း ပေး ဆောင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်း(၂):ရိုဇဟ်ဖျက်ပြီး တခြားတစ်မြို့ သို့ ခရီးထွက်မည်။ ဤခရီးစဉ် ကြောင့် ကဖ်္ဖရဟ် လွတ်ငြိမ်းသွားပါသလား?
မေးခွန်း(၃):ကဖ်္ဖရဟ်ချက်ချင်း လုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးပါလား ?
ဖြေ:မလိုပါ။ ဒါပေမဲ့ ပေါ့ဆမှု အတိုင်းအထိရောက်အောင် တော့အချိန်မဆွဲ သင့်ပေ။ တစ်နည်းအား ဖြင့် ကဖ်္ဖရဟ် ကို မထိမျက်မြင်ပြု သကဲ့သို့ မထင် အောင်ပြု ဖို့တော့လိုပါသည်။
မေးခွန်း(၄): တစ်နှစ်ပြည့် သွားပါပြီး။ ကျွန်တော်အနေဖြင့် ကဖ်္ဖရဟ် မပေး ရသေးပါ။ ဤနောက်ကျမှု ကြောင့် ကဖ်္ဖရဟ်တွင် တစ်ချို့ ထပ်တိုး သွား ပါ သလား?
မေးခွန်း(၅):ကျွန်တော်ကဖ္ဖ်ရဟ်ပေးရမှာ ဝါဂျစ်ဗ်ပါ။ဒါပေမဲ့ ရက် ၆၀ ရိုဇဟ် ထားနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ဆင်းရဲသား အယောက် ၆၀ ကိုလည်း ထမင်းကျွေး နိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရပါမည်နည်း ?
ဖြေ:• မိမိ နိုင်သလောက် ဆင်းရဲသားများကို ထင်းကျွေးပါ။ ပြီးနောက်
အစ်သဂ်ဖေရွလ်လ္လာဟ်اَسْتَغْفِرُاللهَ ) ( ဖတ်ပြီးဝန်ချတောင်းပန်ပါ။
အကယ်၍ ဆင်းရဲသား တစ်ယောက်တည်းကိုလည်း မကျွေး နိုင်
လျှင်အစ်သဂ်ဖေရွလ်လ္လာဟ်اَسْتَغْفِرُاللهَ ) ( သာ ဖတ်ပြီးဝန်ချ တောင်း
တတ်နိုင်သည့်အခါမှ ကဖ်္ဖရဟ် ကို အပြည့်အဝ ပြန်ပေးပါ။
မေးခွန်း(၆):ဆယက်ဒ် မဟုတ်သူ၏ ကဖ်္ဖရဟ် ဆယက်ဒ် ကိုပေး လို့ ရပါ သလား?
ဖြေ :ပေးခွင့်ရှိပါတယ်။ သို့သော် မပေးတာ ပိုကောင်းပါသည်။
မေးခွန်း(၇): ဆင်းရဲသား မိုအ်မင် ဆိုတာ မည်သူကို ခေါ်ပါသနည်း ?
ဖြေ: မိုအ်မင် : အေမာမ်မီယာ ရှီအာ ကိုခေါ်ဆိုပါတယ်။
ဆင်းရဲ သား: မိမိ၏ လူနေမှု အဆင့်အတန်းအရ သုံးငွေ များ နေပြီး
လမြတ် ရမ်တွာန်၏ ကဇွာရိုဇဟ် ကို ပျက်သည့် ကဖ်္ဖရဟ်
အရေးကြီးစကား:လမြတ်ရမ်တွာန် တွင် ကဇွာ ဖြစ်သည့် ရိုဇဟ် အား နောက် နှစ် လမြတ် ရမ်တွာန် မလာမည် ထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဇဟိုရ် အချိန်မရောက်မီအလျှင် ရိုဇဟ် ကိုဖျက်လိုလျှင် ဖျက်ခွင့်ရှိပါသည်။
ဖျက်ခဲ့လျှင် ကဖ်္ဖရဟ်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
သတိပြုရန် : ဇဟိုရ် အချိန်မရောက်မီအလျှင် ကဇွာ ရိုဇဟ် ကိုဖျက်လိုလျှင် ဖျက်ခွင့် ရှိကြောင်း တင်ပြပြီးပါပြီ ။ ဒါလည်းပဲ အချိန် ကျန်သေးသည့် အခြေ အနေအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ကဇွာ ရိုဇဟ်ထားရန် ၅ရက် ကျန်သေးသည်။ လမြတ်ရမ်တွာန် ရောက်ဖို့ ရက်၂၀ ကျန်သေးသည်။
အကယ်၍ ကဇွာ ရိုဇဟ်ထားရန် ၅ရက် ကျန်နေပြီး လမြတ်ရမ်တွာန် ရောက်ရန် ၅ရက်သာလိုတော့သည့် အချိန် တွင် ကဇွာရိုဇဟ် ဖျက်ခွင့် မရှိ ချေ။
မေးခွန်း(၁):ကျွန်တော် မရ်ဟွန်မ်တစ်ဦးဦး အတွက် ဟဒီယာ (အခကြေး ငွေ) ယူပြီး၎င်း မရ်ဟွန်မ် အတွက် ကဇွာ ရိုဇဟ်ထားပါသည်။ ကျွန်တော် အတွက်လည်း ဤကဲ့သို့ ဇဟိုရ် အချိန် ကျော်ပြီးနောက် ရိုဇဟ် ဖျက်ခွင့် မရှိဘူးဆိုသည့် ဥပဒေပဲ ဖြစ်ပါသလား ?
အဖြေ:မရှိပါ။ဇဟိုရ်အချိန် ကျော်ပြီးနောက်လည်း ရိုဇဟ် ဖျက်နိုင်ပါ သည်။
မေးခွန်း(၂):ကဇွာ ရိုဇဟ် ပျက် လို့ပေးရ မည့်ကဖ်္ဖရဟ် သည် ဘာဖြစ်ပါ သနည်း?
ဆင်းရဲသားမိုအ်မင်၁၀ ဦးကို ဗိုက်အဝ ကျွေးရမည်။
၎င်းတို့အား ၇၅၀ ဂရမ် တစ်နည်းအား ဖြင့် ၃ပေါင် ရှိ သည့်
ဂျုံမှုန် (သို့) ဆန် (သို့) အခြား ပေးဆောင်ရပါမည်။
မှတ်စု : • ဤမရှိဆင်းရဲသားများ ကိုငွေပေး၍ မရချေ။
အကယ်၍ ငွေပေးမည်ဆိုလျှင်လည်း ၎င်းအား ဂျုံမှုန့်စသည်ဖြင့်
ဆင်းရဲသား ၁၀ ဦးကို ပြည့်ဖို့ အရေးကြီးပါသည်။ ဆင်းရဲသား
တစ်ဦးတည်းကို ကဖ်္ဖရဟ် ၁၀ခုဆ ပေး၍ မရချေ။
မေးခွန်း(၃): ဆင်းရဲသား မိုအ်မင် ဆိုတာ မည်သူကို ခေါ်ပါသနည်း ?
ရွေ့ဆိုင်း အချိန်ဆွဲ ခြင်း အတွက် ကဖ်္ဖရဟ်
လမြတ်ရမ်တွာန် တွင် ကဇွာ ဖြစ်သည့် ရိုဇဟ် အား နောက် နှစ် လမြတ် ရမ်တွာန် မလာမည် ထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဇိုက် မကျန်းမမာဖြစ်နေ၏။ လမြတ် ရမ်တွာန်၏ ရိုဇဟ် ၅ ရက် မထား ခဲ့ချေ။ လမြတ်ရမ်တွာန် ပြီးနောက်
⌠ဇိုက်နေပြန်ကောင်းသွားသည်။သို့သော် နောက်နှစ် ရမ်တွာန် လ မြတ် ရောက်လာ သည် အထိ ရိုဇဟ် ကဇွာ မထားရသေးပေ။
⌠နောက်နှစ် လမြတ် ရမ်တွာန် ရောက်ဖို့ ၅ရက်သာ လိုတော့သည်။ ထားဖို့ ကဇွာရိုဇဟ် ကျန်တာကလည်း ကလည်း ၅ရက်ပါ။ ဇိုက် ရိုဇဟ် ထားဖို့လုပ်စဉ် အဖျားဝင်လာပြီး မထားနိုင်ပါ။
á အခြေအနေ အနေ နှစ်ရပ်စလုံးတွင် ဇိုက် အတွက် ကဇွာ ရိုဇဟ်အပြင် အချိန်ရွေ့ဆိုင်း အချိန်ဆွဲမှု အတွက် ကဖ်္ဖရဟ် ပါ ပေးဆောင်ရန်အရေးကြီး ပါသည်။
ဂရုပြုရန်:(က)ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် နမူနာ အဖြင့် ဇိုက် နေမကောင်းတာ ကို
အခဲတစ်ခုခု ဥပမာ ခရီးထွက်ခြင်း စသည်ဖြင့် ဆိုလျှင် ဤ
ဥပဒေသ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
(ခ)မည်သူမဆို တမင်တကာရိုဇဟ်မထားမည်၊ရိုဇဟ် ဖျက်မည်
ဆိုလျှင် လာမည့်နှစ် လမြတ် ရမ်တွာန် မတိုင်မီ ကဇွာရိုဇဟ်
ထားရန်တာဝန်ရှိပါသည်။ဤကဲ့သို့တာဝန် မကျေခဲ့လျှင် ဤ
အတွက်ကဖ်္ဖရဟ် အပြင်အချိန်ဆွဲမှုအတွက်ပါ ကဖ်္ဖရဟ်ပေး
မေးခွန်း(၁): အချိန်ဆွဲခြင်း အတွက် ကဖ်္ဖရဟ် ဘာပေးဆောင်ရမည်နည်း?
ဖြေ:ရက်တိုင်း အတွက် ၇၅၀ ဂရမ် တစ်နည်းအား ဖြင့် ၃ပေါင် ရှိ သည့် ဂျုံမှုန် (သို့) ဆန် (သို့) စသည်ဖြင့် မရှိဆင်းရဲသား မိုအ်မင်ကို ပေး ဆောင် ရပေမည်။
အကယ်၍ ငွေပေးမည်ဆိုလျှင်လည်း ၎င်းးအား ဂျုံမှုန်စသည်ဖြင့်
အချိန်ဆွဲ မှုအတွက် ကဖ်္ဖရဟ်တစ်ကြိမ် တစ်ခါသာ ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ တစ်နှစ် နောက်ထပ် နောက်ကျ မည်ဆိုလျှင် လည်း
ကဖ်္ဖရဟ် ထပ်၍ မတိုးချေ။
မေးခွန်း(၂): ဆင်းရဲသား မိုအ်မင် ဆိုတာ မည်သူကို ခေါ်ပါသနည်း ?
ဖေဒ်ယဟ်(فدیه) ဆိုလိုသည်မှာ ဗဒဲလ် (بدل)(သို့) အေဝဇ်(عوض)
မေးခွန်း(၁):ဘယ်အတွက် ဗဒဲလ် (بدل) ဖြစ်ပြီး ?
ဘယ်အတွက် အေဝဇ်(عوض) ဖြစ်ပါသနည်း?
ဖြေ: ရိုဇဟ်မထားသည့် အတွက် ဗဒဲလ် (بدل) (သို့) အေဝဇ်(عوض) လုပ်ရ ပါ သည်။ ဤအတွက် တစ်ချို့ စည်းမျည်းစည်းကမ်းများ ရှိပါတယ်။
ဖေဒ်ယဟ်(فدیه) ကို မည်သူပေးဆောင်ရပါသနည်း ?
၁ - အသက်ကြီး အဖိုးကြီး (သို့) အဖွားကြီး
၂ - ရေအလွန် ငတ်သည့်ရောဂါ ရှိသူများ
၃ - ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး
၄ - ကလေးငယ်များ ကို နို့ချို တိုက်ကျွေးနေရသည့် အမျိုးသမီး
၅ - ရောဂါကြောင့် ရိုဇဟ် မထားသူပြီးနောက် နောက်နှစ် ရမ်တွာန်လမြတ် အထိ ၎င်း ရောဂါ နာတာရှည်နေလျှင်
အချို့  အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်
ရိုဇဟ်ထားရန် အင်အား မရှိ
(သို့) ၎င်းအပေါ်ရိုဇဟ်ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။၎င်းအနေဖြင့် ရိုဇဟ်တိုင်းအစားဖေဒ်ယဟ် ပေး ဆောင်ရပါမည်။
ရိုဇဟ်ထားဖို့၎င်းအတွက် အလွန်တရာ အခက်အခဲနှင့်ရင်ဆိုင်
သတိပြုရန်: တစ်နှစ်တာ အတွင်း ရာသီ ဥတု အေးမည်။ ရက်တို မည်။ ရိုဇဟ် ထားရန် ဖြစ်နိုင်သည့် အနေ အထားတွင် ရိုဇဟ် ကဇွာထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက မလိုချေ။
ရေအလွန် ငတ်သည့်ရောဂါ ရှိသူများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့အတွက်
(သို့) ၎င်းအပေါ်ရိုဇဟ်ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။၎င်းအနေဖြင့် ရိုဇဟ်တိုင်းအစားဖေဒ်ယဟ် ပေးဆောင် ရပါမည်။
သတိပြုရန်: တစ်နှစ်တာ အတွင်း မည်သည့် ရာသီဥတု ၌ မဆို ရိုဇဟ် ထားရန် ဖြစ်နိုင်သည့် အနေ အထားတွင် ရိုဇဟ် ကဇွာထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါ သည်။
မွေးဖွားခါနီး ၊နီးလာချိန်အမျိုးသမီး နှင့် ရိုဇဟ် ထားခြင်း
ရင်သွေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ် ရှိလျှင် ၎င်းအတွက်ရိုဇဟ်ထားခွင့်မရှိ
နောက်မှရိုဇဟ်ထားနိုင်သည့် အခြေအနေသို့ရောက်လျှင်ကဇွာ ရိုဇာဟ် ထားရမည်
၄ - ကလေးငယ်များ ကို နို့ချို တိုက်ကျွေးနရသည့် အမျိုးသမီး
၎င်း၏နို့နည်းပြီးမည်သည့် နို့ထိန်းသည်မှလည်း မရ၊ နို့ဗူးလည်း ကလေး အတွက် မသင့်လျှော်၊၎င်း ၏ ရိုဇဟ်ထားခြင်း
၅ - ရောဂါသည်
ရောဂါကြောင့် ရိုဇဟ် မထားမည် ၎င်းအတွက်ရိုဇဟ်ကဇွာ ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။ နေ့တိုင်း အတွက် ဖေဒ်ယဟ် ပေးရမည်
နောက်နှစ် ရမ်တွာန်လမြတ် အထိ ရောဂါ နာတာရှည်နေမည်
(က)အကယ်၍ အခြား အကြောင်းကြောင့် ဥပမာ ခရီးစဉ် ကြောင့် ရိုဇဟ် မထားမည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ခရီးများထွက်နေရမည်။ နောက်ဆုံး ရှေ့ လသည် ရမ်တွာန် လမြတ် ရောက်မည်ဆိုလျှင် ၎င်း အပေါ် ရိုဇဟ် ကဇွာ ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသည်။ ဖေဒ်ယဟ် ပေးရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။
(ခ) ဤအတိုင်း ရှရီအီ အကြောင်းပြချက် ဥပမာ ရောဂါကြောင့် ရိုဇဟ် မထားမည်။ နောက်မှ နေကောင်း ကျန်းမာ သွားမည်။ပြီးနောက် တစ်နှစ် ပတ်လုံး ခရီးများထွက်နေရမည်။ နောက်ဆုံး ရှေ့ လသည် ရမ်တွာန် လမြတ် ရောက်မည်ဆိုလျှင် လည်း ၎င်း အပေါ် ရိုဇဟ် ကဇွာ ထားရန် သာ ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသည်။ ဖေဒ်ယဟ် ပေးရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။
မေးခွန်း(၁): ဖေဒ်ယဟ် ဘယ်လောက် ပေးဆောင်ရပါသနည်း ?
မှတ်စု: • ဤမရှိဆင်းရဲသားများ ကိုငွေပေး၍ မရချေ။
တစ်ယောက်တည်း ကို တစ်ရက်ထက်မက ဖေဒ်ယဟ် ပေးနိုင်ပါ
ဖေဒ်ယဟ် တစ်ကြိမ် တစ်ခါသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဖေဒ်ယဟ် ထပ်၍ မတိုးချေ။
မရှိဆင်းရဲသား မိုအ်မင်အကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါ
ကဇွာ ရိုဇဟ် များ နှင့်ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် စကားအချို့
၁- ရူးပြီးမှပြန်ကောင်းသွားမည်။ ရူးခဲ့ သည့်ကာလ ၏ ကဇွာရိုဇာဟ် များ ထား ရန်ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။
၂- ကာဖေရ် မွတ်စလင်မ် ဖြစ်လာမည်။ ကိုဖ် ကာလ ၏ ကဇွာရိုဇာဟ် များ ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။
သတိပြုရန် - အကယ်၍ မွတ်စလင်မ် ကာဖေရ် ဖြစ်သွားမည်။ ပြီးနောက် အစ္စလာမ် ဘာသာဖက် ပြန် လှည့် လာမည်ဆိုလျှင် ကုဖ်ကာလ၏ ကဇွာ ရိုဇဟ်များ ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသည်။
၃- အကယ်၍ မနုဿ လူသား အနေဖြင့် မူးယစ် ၍ (သို့) သတိလစ် ပြီး ရိုဇဟ်မထားခဲ့မည်။၎င်း၏ကဇွာရိုဇဟ်ါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသည်။
သတိပြုရန် - ဤအတွက်ကြောင့် ဆိုလျှင်လည်း မကွာခြားပါ။
(က) မူးယစ် ခြင်းဆိုသည်မှာ အရက်သေစာ သောက်၍ ဖြစ်စေ (သို့) ဆေး သောက်၍ ဖြစ်စေ ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) တမင်တကာ သောက်သည့် ဖြစ်စေ ၊ ကုသ မှု အတွက် ဖြစ်စေ ၊ အခြား အကြောင်း အရာ တစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်စေ
၄- ကဇွာရိုဇဟ်များ၏ အရေအတွက်
မေးခွန်း(၁):သတိမရဘူးဖြစ် နေပါတယ်။ကျွန်တော် ကဇွာရိုဇဟ် ၅ရက် လား (သို့) ၆ရက်လားဆိုတာ သံသယဝင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်မှာ ဘာ တာဝန် ရှိပါသလဲ ?
ဖြေ: ၁၀၀ % ယုံကြည်မှု ရှိသည့် ကဇွာရိုဇဟ် ရက်အတိုင်း ကဇွာ ရိုဇာဟ် ထားရပါမည်။
၅- ကဇွာရိုဇဟ်များ တွင် အစီအစဉ်
ကျွန်တော် ဟီဂျရီ ၁၄၂၇ခုနှစ် လမြတ်ရမ်တွာန်၏ ရိုဇဟ် ၅ရက် (နှင့်)
ဟီဂျရီ ၁၄၂၈ ခုနှစ် လမြတ် ရမ်တွာန်၏ ရိုဇဟ် ၄ ရက်
မေးခွန်း: ကဇွာ ရိုဇဟ် ထားချိန်တွင် အစီအစဉ်တကျ ပထမ ဟီဂျရီ ၁၄၂၇ ၏ ကဇွာရိုဇဟ်ကို ထားမည်ပြီးနောက် ဟီဂျရီ ၁၄၂၈ ကဇွာ ရိုဇဟ် ကိုထား မည်။ဤသို့လုပ်ရန် အရေးကြီး ပါသလား? (သို့) မိမိသဘောအရ ထားပိုင် ခွင့် ရှိပါသလား?
ဖြေ:သတိတစ်ခု ရှိဖို့သာလိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဟီဂျရီ ၁၄၂၉ ၏ လမြတ်ရမ်တွာန် ရောက်ဖို့ ၄ရက်သာလိုတော့သည်ဆိုလျှင် ဟီဂျရီ ၁၄၂၈ ၏ ၄ရက်ရိုဇဟ် ကဇွာ ကို ပထမ ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ဤကဲ့သို့ မဟုတ်ပါက အစီအစဉ် အတိုင်း ထားရန် အရေး မကြီးချေ။
၆ - case
တစ်ဦး တစ်ယောက်အနေဖြင့် ရောဂါ (သို့) ဟိုင်းဇ်(ခ)(သို့) နေဖါစ် ကြောင့် ရိုဇဟ် မထားပါ။ ပြီးနောက် နောက်နှစ်လမြတ် ရမ်ဇာန် မလာမည် အလျှင် အလ္လာဟ် အမိန့် ခံသွားပါတယ်။
မေးခွန်း ၃ : ၎င်းအတွက် ကဇွာ ရိုဇဟ် ရှိ ပါလား ?
ဖြေ : မရှိပါ။
အရေးကြီး ပွိုင့် နှစ်ခု
သမီးအရွယ်ရောက်ပါပြီ။ရောဂါမဖြစ်ပါဘူး။ရိုဇဟ်ထားရင် အားနည်းတယ် လို ခံစားရပါတယ်။ရိုဇဟ်မထားနိုင်ပါ။ဒီလိုနဲ့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး နောက်နှစ် ရမ်ဇာန်လမြတ် လာသည့် အထိဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း(၁) : ၎င်းအတွက် ကဇွာ မအ်ဖ် ဖြစ်ပါသလား ?
ဖြေ : မဖြစ်ပါ။ ကဇွာ ကျန်ပါတယ်။ ဖေဒ်ယဟ် ပေးဖို့ ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ပါ။
လူငယ်ဘဝမှ ရိုဇဟ် မထားခဲ့ပါ။အခု အသက်ကြီးလာပါပြီး။ သောင်ဗာ လည်း ပြုပြီး ပါပြီး ။ဒါပေမဲ့ ကဇွာ ရိုဇဟ် လည်းမထား နိုင်ပါ ။
မေးခွန်း(၂) : ကျွန်တော်အပေါ် ရိုဇဟ် မအ်ဖ် ဖြစ်ပါသလား?
မေးခွန်း(၃) :အသက်ရှင်နေစဉ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးပြီး ကျွန်တော် ရိုဇဟ် ကိုထားခိုင်းလို့ ရပါသလား ?
ဖြေ:မရပါ။ကွယ်လွန်ပြီးနောက် အမွေခံတွေ ဤကိစ္စအတွက် တစ်ခုခု လုပ် ဆောင်ပေး ရန် သေတမ်းစာတွင် မှာခဲ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိပိုင်ဆိုင်မှု ၏ ၃ပုံ၊၁ပုံ 1⁄3 ကို ထုတ်ပြီး ရိုဇဟ် ကို ဝန်ဆောင်မူပေးပြီးထားခိုင်း ဖို့ သေတမ်းတွင် မှာခဲ့ ရပေမည်။
(ယနေ့ အမွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိသားစု အတွင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမ အတွင်း ပြဿနာ တက်၊ရုံးရောက်နေသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အဖေအမေ (သို့) ပိုင်ရှင်မှ တရားဝင်သေတမ်းစာ မပြုခဲ့သည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာပြန်ဆိုသူ )
မိခင်၊ဖခင် အတွက် ကဇွာ ရိုဇဟ်
၁-သားအကြီးဆုံး အတွက် မိခင်၊ဖခင် အတွက် ကဇွာ ရိုဇဟ်ထားရန် (သို့) တစ်ဦးတစ်ယောက် ကို (ဝန်ဆောင်မှု ပေးပြီး) ထားခိုင်းရမှာ မပြုမနေရ ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသည်။
၂- သားအကြီးဆုံး ဆိုတာ :
မိခင်၊ဖခင်ကွယ်လွန်ပြီး နောက် အသက်ရှင်လျက်ကျန်နေသည့်သားများ အတွင်း မှ အကြီးဆုံး သားကို ဆိုလိုပါသည်။
အကြီးဆုံးသား ဟာ မိခင်၊ဖခင် အသက်ရှင်နေစဉ် ကွယ်လွန်သွား တာ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သမီးများ အတွက် မည်သည့် တာဝန် မျှ မရှိပါ။
၃-• မိခင်၊ဖခင်မထားခဲ့သည့် ကဇွာ ရိုဇဟ် များအပေါ် သံသယမရှိ ယုံ၏။ ဤ ကဇွာ ရိုဇဟ်များကိုသာ၊ သား အကြီး ဆုံးမှ ထားပေးရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါ သည်။
သံသယ ရှိသည့် ကဇွာရိုဇဟ်များကို ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။
၄-• အကယ်၍သားအကြီးဆုံး မိခင်၊ဖခင်၏ ကဇွာ ရိုဇဟ်များ ကို မထားဘဲ (သို့) မထားခိုင်း မည်အလျှင် အလ္လာဟ် အမိန့်ခံသွား ပါက ဒုတိယ သား အပေါ် မည်သည့် တာဝန် မျှ မရှိချေ။
မေးခွန်း :ကျွန်တော် သား အကြီးဆုံးပါ။ ကျွန်တော်ကိုင်တိုင် ကဇွာ ရိုဇဟ် ထားဖို့ ရှိပါသည်။ ဖခင်မရ်ဟွန်မ် အတွက် လည်း ထားဖို့ ရှိပါသည်။ ဘယ်ကဇွာ ရိုဇဟ် ကိုပထမ ဦးစွာ ထားရပါမည်နည်း ?
ဖြေ : နှစ်ခု စလုံး အတွက် အစီအစဉ် ထားဖို့ မလိုပါ။ ဘယ်ကဇွာ ရိုဇဟ် ကို စထားထား ရပါသည်။ သို့သော် လူကြီးမင်း၏ ကဇွာ ရိုဇဟ် ပြီးခဲ့ သည့် နှစ် ရမ်တွာန်လမြတ် ၏ ကဇွာဖြစ်မည်။နောက် ရမ်တွာန် အသစ် လာလည်း ခေါင်းပေါ်ရောက်နေပြီး ။(နီးနေပြီး။) ဘယ်လောက်နီး လည်း ဆိုရင် ထားရမည့်ကဇွာရိုဇဟ် အရေ အတွက်လောက်သာ လိုတော့ သည်ဆိုလျှင် မိမိ ကဇွာ ရိုဇဟ် ကို အရင် ထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
ခရီးသည် ၏ ရိုဇဟ်
(က) ၄ရကတ်နမာဇ်များ (ဇဟိုရ်၊အဲစ်ရ်၊အေရှာ) အတွက်
၂ရကတ်ဖတ်ရန် ဖြစ် သွားပေသည်။
(ခ) ရိုဇဟ် ထားရန် ဟရာမ် ဖြစ်သွား ပါသည်။နောက်မှ ကဇွာ ရိုဇဟ်များ
ကို ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် - ဤကိစ္စ အကျယ်တဝင့် သောင်ဇီးဟိုလ် မစာ အေလ် ကျမ်း တွင် လေ့လာ နိုင်ပါသည်။)
၁- လမြတ်ရမ်တွာန် တွင် ခရီး ထွက်ခြင်းသည် ဟရာမ် မဟုတ်ပါ။သို့သော် ရိုဇဟ် ကိုရှောင်ရန် ခရီးထွက်ခြင်း သည် မက်ရူးဟ် ဖြစ်ပါသည်။
၂- လမြတ်ရမ်တွာန် တွင် ခရီး ထွက်ခြင်း ၊ ထိုနည်းတူစွာ ရိုဇဟ် မထား နိုင်သူ အတွင် ဗိုက်အဝ စားသောက်ခြင်း၊မေထုံမှီဝဲ ခြင်း သည် မက်ရူးဟ် ဖြစ်ပါ သည်။
၃- အကယ်၍ ရိုဇဟ် ထားသူ အနေဖြင့် ဇဟိုရ် ပြီးမှ ခရီးထွက်မည်ဆိုလျှင် ၎င်း ရိုဇဟ် ကို ဆုံးခန်းတိုင် ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသည်။
၄- အကယ်၍ ဇဟိုရ် မတိုင်မီ ခရီး ထွက်မည်ဆိုလျှင် ရိုဇဟ် ပျက်ပါသည်။ နီယသ် ပြုထားသည် ဖြစ်စေ ၊မပြုထားသည်ဖြစ်စေ။ ဘာမျှမကွာခြားပေ။
⌠ဤ အခြေအနေတွင်လည်း ဟဒ်ဒေသရာခွစ် (ترخص حد) အထိမရောက် မခြင်း စားခြင်း သောက်ခြင်း စသည်တို့ကို မပြုနိုင်ချေ။
မေးခွန်း(၁) : ဟဒ်ဒေသရာခွစ် (ترخص حد) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?
ဖြေ: မြို့တွင်းအဇါန်သံ ကို မကြားရသည့်နေရာ နှင့် မြို့ရိုးကို မမြင် ရ တော့သည့်နေရာ ကို ခေါ်ဆိုပါသည်။
၅- အကယ်၍ ခရီးသည် အနေဖြင့် ၎င်းအနေဖြင့် ရိုဇဟ်ကို ပျက်စေ
ဇဟိုရ် မတိုင်မီနေရပ်ကိုပြန်ရောက် သည့် အရာတစ်ခုခုကိုမလုပ်ထား
မည်။ လျှင်ရိုဇဟ် ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါ
အကယ်၍ ရိုဇဟ် ကို ပျက်စေသည့်
သည့် အရာ တစ်ခုခု ပြုထားမည်။
ဇဟိုရ် ပြီးမှရောက်မည်ဆိုလျှင် ထို့
နေ့ ရိုဇဟ် ထား၍မရချေ။ ပြီးမှ
၁၀ရက် အထိနေရမည့် နေရာ သို့ ကဇွာ ရိုဇဟ် ထားရပါမည်။
မေးခွန်း ၁ - လမြတ်ရမ်တွာန်၏ ကဇွာရိုဇဟ် ကဇွာ ရှိသူ အတွက် မွတ်စ် သဟဗ် ရိုဇဟ် ထားခွင့်ရှိပါသလား ?
ဖြေ - မရှိပါ။
မေးခွန်း ၂ - အခြားရိုဇဟ်တစ်ခုခုဥပမာ ကဖ်္ဖရဟ် ရိုဇဟ် (သို့) ကတိသစ္စာ ပြုထား သည့်ရိုဇဟ် ထားရန် ကျန် ပါသည်။(ဤအချိန်) မွတ်စ် သဟဗ် ရိုဇဟ် ထားခွင့်ရှိပါသလား ?
အဖြေ - ရှိပါသည် ။ ( အာယာသွလ္လာဟ်ခူဝီး ၊အာယာသွလ္လာဟ်စစ်သာနီ)
မရှိပါ။ (အေမာမ်ခိုမေနီ ၊အာယာသွလ္လာဟ်ခါမေနာအီ)
မေးခွန်း ၃- ကျွန်တော် မွတ်စ် သဟဗ် ရိုဇဟ် ထားပါသည်။ မိတ်ဆွေ မိုအ်မင် တစ်ဦး မှ ကျွန်တော်ကို စားဖို့ ဖိတ်ပါသည်။ ကျွန်တော် အတွက် ရိုဇဟ် ပျက်ပြီး ၎င်း၏ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံရမည်လား? (သို့) ရိုဇဟ် အပြည့် ထားရ မည်လား?ဘယ်ဟာ ပိုကောင်း ပါသလဲ ?
ဖြေ - ဖိတ်ခေါ်မှု ကို လက်ခံပြီး ရိုဇဟ် ပျက်လိုက်တာ ပိုပြီး စဝါးဗ်ရပါ သည်။
မေးခွန်း ၄ - ဇနီးသည် အနေဖြင့် ခင်ပွန်း ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိ ဘဲ မွတ်စ် သဟဗ် ရိုဇဟ် ထားခွင့် ရှိပါသလား?
အဲအ်သေကာဖ်ဆိုတာ - ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တွင် အချို့စည်းကမ်းချက်
များနှင့် အတူနေခြင်း၊ဤလုပ်ရပ် သည့် မွတ်စ်သ
ဟဗ် အေဗါဒသ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
မိုအ်သကေဖ်ဆိုတာ - အဲအ်သေကာဖ်ထိုင်သူ
မေးခွန်း၁- အဲအ်သေကာဖ် ဝါဂျစ်ဗ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသလား?
ဖြေ - အဓိဋ္ဌာန် ၊ကျိန်ဆိုခြင်း(သို့) ၊ ကတိသစ္စာ ကြောင့်ဆိုလျှင် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အဲအ်သေကာဖ် အတွက် စည်းကမ်းများ
၁- အဲအ်သေကာဖ်ထိုင်သူ ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည် - ရူးသွပ်နေသူ၏ အဲအ်သေကာဖ် မပိုင်ချေ။
၂ -နီယသ် • ကိုရ်ဘသန်အေလ္လာဟ်( قربةًاِلی الله) ၊အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်
သခင်၏ မွတ်စ်သဟဗ် အမိန့်တစ်ခုကို ထမ်းဆောင်ရန်အ
တွက် အဲအ်သေကာဖ် ထိုင်ပါသည်။
နီယသ် အဓိဋ္ဌာန်၊ရည်ရွယ်ချက် ၏အမည် ဖြစ်ပါသည်။
နှုတ်မှ စကားစု ကို ပြောရန် အရေးမကြီးချေ။
၃- အဲအ်သေကာဖ်ထိုင်သူ ရိုဇဟ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
အဲအ်သေကာဖ် ရိုဇဟ်မရှိဘဲ ထိုင်မရချေ။
လမြတ်ရမ်တွာန် ၏ ရိုဇဟ် လား၊ အခြားလများ တွင်ကဇွာ
ရိုဇဟ် လား (သို့) မွတ်စ်သဟဗ် အတွက်လား ၊မည်သို့မျှ
၄ - အဲအ်သေကာဖ် ၏ ရက်အတိုင်းအတာ - အနည်းဆုံး(၃) ရက်- ရက် များအတွက် မည်သည့် သတ်မှတ်ချက်မျှမရှိပါ။
၅ - အဲအ်သေကာဖ် မည်သည့် ဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော်တွင် ဖြစ်ရ မည် နည်း?
ဖြေ -(က) ကအ်ဗာ ဝတ်ကျောင်းတော် (အလ္လာဟ်အိမ်တော်)
(ခ) မစ်္စဂျစ်ဒ်ဒေနဗဝီ (ကိုယ်တော်မြတ်  ၏ ရောင်ဇာရှိသည့်ဗလီ)
(ဃ) မစ္စ်ဂျစ်ဒ်ဒေ ဗဆွရဟ်
(င) ၎င်းအပြင် မြို့ ရှိ ဂျာအ်မေ့မစ္စ်ဂျစ်ဒ်များတွင်(ရေဂျာအေ မတ်သ်
လူးဒ်)နီယသ် ဖြင့် အဲအ်သေကာဖ် ထိုင်နိုင်ပါသည်။
မေးခွန်း ၂ - (ရေဂျာအေ မတ်သ်လူးဒ်) ဆိုတာ ?
ဖြေ - ဤအလုပ်ကို မြတ်အလ္လာဟ် နှစ်မြို့ မည်ဟု မျှော်လင့်ချက်ကို ခေါ် ပါသည်။
မေးခွန်း ၃ - ဂျာအ်မေ့မစ္စ်ဂျစ်ဒ် ဆိုတာ?
ဖြေ - လူအများစုဝေးသည့် မစ္စ်ဂျစ်ဒ် ကို ခေါ်ပါသည်။
မေးခွန်း ၄-၎င်း မစ္စ်ဂျစ်ဒ် တွင် နမာဇ်စေ ဂျွန်မ်အဟ် ဖြစ်ဖို့ အရေး ကြီးပါ သလား?
ဖြေ - မကြီးပါ။
၆ - ပုဂ္ဂိုလ် အချို့ အတွက် ခွင့်တောင်းရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဥပမာ - (က) ဇနီးအဲအ်သေကာဖ်ထိုင်ချင် လျှင် ခင်ပွန်း၏ ခွင့်ပြုချက် ယူဖို့
(ခ) မိခင်၊ဖခင်များ အတွက်အနှောက်အယှက်၊ဒုက္ခဖြစ်နေသည်
ဆို လျှင်သားသမီးများ အနေဖြင့် အဲအ်သေကာဖ်ထိုင်ဖို့ ခွင့်
၇- အဲအ်သေကာဖ် ထိုင်စဉ် မစ္စ်ဂျစ်ဒ် အတွင်းနေရန် ၊အပြင်မထွက်ရပါ။
အဲအ်သေကာဖ် ဆိုင် ပြဌာန်းချက်များ
မေးခွန်း ၁- ကျွန်တော် အဲအ်သေကာဖ်ထိုင်ချင်ပါသည်။ ကျွန်တော် အဲအ် သေကာဖ် ဘယ်အချိန်မှ စတင်ရမည် ဖြစ်ပါသနည်း? နီယသ် ဘယ်အချိန် မှစလုပ်ရမည်နည်း?
ဖြေ - ဥပမာ အသင်အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူး၊ကြာသပတေး၊သောကြာ ဤ ၃ရက်အတွက် အဲအ်သေကာဖ် ထိုင်ချင်သည်။
အဲအ်သေကာဖ် အစ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဖဂျရ်အဇါန်မှ စတင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
⌠တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုအချိန် (ဖဂျရ်မတိုင်မီ) အလျှင် မစ္စ်ဂျစ်ဒ် ကို ရောက်နေရပါမည်။ ပြီးနောက် နီယသ်ပြုရပါမည်။
အဲအ်သေကာဖ် သောကြာမရ်ရိဗ် အချိန် တွင် ပြီးဆုံးမည် ဖြစ်ပါသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် နေ့ ၃ ရက် ည ၂ည မစ္စ်ဂျစ်ဒ်တွင် နေထိုင်ရမည် ဖြစ် ပါ သည်။
(က) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (ဖဂျရ်အဇါန် မှစမည်) အချိန်ပြည့်
(ခ) ကြာသပတေးနေ့ မစ္စ်ဂျစ်ဒ် တွင်
(ဂ) သောကြာနေ့( မဂ်ရိဗ်အချိန်တွင်ပြီးဆုံး) နေထိုင်ရန်အရေးကြီး
၂ - • မွတ်စ်သဟဗ် အဲအ်သေကာဖ် ပထမ (သို့) ဒုတိယရက်တွင်ပျက်ခွင့်
တတိယရက် စပြီးနောက် အဲအ်သေကာဖ် ပျက်ပိုင်ခွင့် မရှိပါ။
ထိုနည်းတူစွာ၎ရက်မြောက်နှင့် ၅ ရက်မြောက်နေ့ တွင် ပျက် ပိုင်ခွင့်
ရှိပါသည်။ ၆ရက်မြောက်နေ့ စပြီးလျှင်ပျက်ခွင့်မရှိချေ။
အနှစ်ချုပ်-၃ရက်ပြည့်တိုင်းပြည့်တိုင်း အဲအ်သေကာဖ် ကို ပျက်ခွင့် မရှိချေ။
၃ - အဲအ်သေကာဖ် ထိုင်နေစဉ် မစ္စ်ဂျစ်ဒ် အပြင် ထွက်မည်။
(က) တမင်တကာ အဲအ်သေကာဖ် မပိုင်ချေ။
နှင့် ပြဌာန်းချက်ို သိသိဖြစ်စေ။
(ခ) မိမိသဘောဆန္ဒ အရ မသိသည်ဖြစ်စေ။
အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက် အနေဖြင့် အက်္ကလီ(عقلی)၊ ရှရ်အီ (شرعی)၊ (သို့မဟုတ် ) အိုရ်ဖီ (عرفی) ကြောင့် မစ္စ်ဂျစ်ဒ် အပြင် ထွက်မည်ဆိုလျှင် အဲအ်သေကာဖ် မဖျက်ချေ။
အက္က်လီ ၏လိုအပ်ချက် - ဥပမာ - အပေါ့အလေး အတွက်
ရှရ်အီ ၏လိုအပ်ချက် - ဥပမာ - ဂိုစ်လေဂျနာဗသ် အတွက်
အိုရ်ဖီ ၏ လိုအပ်ချက် - ဥပမာ - ရောဂါသည်ကို ကြည့်ရန် အတွက် ၊
မယသ် လိုက်ပို့ရန် အတွက်
အဲအ်သေကာဖ် ထိုင်စဉ် ဟရာမ် ဖြစ်ပါသည်။
၂- ကာမ ရသာတစ်ခုခု ခံစားခြင်း ၊ယုတ်စွ အရသာခံပြီး ထိတွေ့ခြင်း သည် လည်း ဟရာမ် ဖြစ်ချေ၏။
၃- Masturbation (ခ) လက်ဖြင့် သုတ်ရည်ထွက်အောင် ပြုခြင်း
၄- ရေမွှေး သုံးခြင်း
၅ -အရောင်းအဝယ် ပြုခြင်း
အကယ်၍ စားဖို့သောက်ဖို့ မဝယ်မဖြစ်အခြေအနေတွင် ခွင့်ရှိပါသည်။
၇- အသာစီးရရန် နှင့် မိမိ (ပညာ) ပိုကြီးကြောင်းပြရန် ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အငြင်း အခုံ ပြုခြင်း
၈-တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အတင်းအဓမ္မ ထခိုင်းပြီး ကိုယ်တိုင် ထိုင်ခြင်း သည် ဟရာမ် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ လုယူထား သည့်အိပ်ယာ ပေါ် တွင် အိပ် ခြင်းသည်လည်း ဟရာမ် ဖြစ်ပါသည်။
အီးဒ်အတွက် လနှင့် ပတ်သက်သည့် အမေးများ နှင့်အဖြေများ
ယနေ့ လမြတ်ရမ်တွာန်၏ ၂၉ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။အချိန် အနည်းငယ် အတွင်း ဝါဖြေရတော့ပါမည်။လမြင်မည် ၊မမြင်မည် လည်း မသိပါ။
မနက်ဖန် လမြတ် ရမ်တွာန်နောက်ဆုံး ရက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် တို့ အတွက် ရိုဇဟ် တစ်ရက် ထားရန် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ (သို့) မနက်ဖန်အီးဒ် ဖြစ်မည်။
ဤရှုတ်ထွေးမှု ကိုဖြေရှင်းရန် ရှေ့ တွင် ကြိုးစားထားပါသည်။
ကျွန်တော် အနေဖြင့် H.I မောင်လာနာ ရှာဟစ်ဒ် ကာရှဖီ ဆပ် ကိုကျေး ဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းအနေဖြင့် စာအုပ်၏ ဤအပိုင်းကို တည်းဖြတ် ပြုပြင် ပေးခဲ့ပါသည်။
မေးခွန်း၁-ကျွန်တော် အနေဖြင့် လ နှင့် ပတ်သက်ပြီး သုတေသနပြု ဖို့ အ ရေးကြီးပါသလား?
မေးခွန်၂-အကယ်၍ လမြင်တာ ကိုကျွန်တော် သိပြီးနောက် တခြား သူတွေ ကို သတင်းပေးရန် အရေးကြီး လိုအပ် ပါသလား?
အဖြေ - မလိုအပ်ပါ။
မေးခွန်း၃-ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လကို မြင်တာပါ။ကျွန်တော် မနက်ဖန် အီးဒ် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသလား?
ဖြေ - ဟုတ်၊ရပါတယ်။လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အီးဒ် မနက်ဖန် လုပ်ရန် အရေး ကြီးပါသည်။
မေးခွန်း၎ - အီးဒ် ပွဲတော် ကျင်းပရန် ဘာအရေးကြီးပါသလဲ?
ဖြေ - အရာနှစ်ခု လုပ်ဆောင်ထားဖို့ ဂရု ရှိပါ။
(က) အကယ်၍ ဖေသ်ရဟ် ဝါဂျစ်ဗ် ဆိုလျှင် ထုတ် လိုက်ပါ။
(ခ) အီးဒ် နေ့ တွင် ရိုဇဟ်ထား ခြင်းသည် ဟရာမ် ဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်း၅-အီးဒ်နမာဇ် ကကော် ဘယ်လိုဘာလဲ?
ဖြေ- ဂိုက်ဗသ် သေ အေမာမ်ဇမာန်း  တွင် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ပါ။ မွတ်စ် သဟဗ် ဖြစ်ပါသည်။
ဖြေ- ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ပါ။
မေးခွန်း၇-ကြာဆံ ၊မုန့်ဟင်းခါး ၊ ကျွေးတာကော် ….?
ဖြေ -ဘယ်တစ်ခု မှ ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ပါ။
မေးခွန်း၈-ကိုယ်တိုင်မြင် ရသည့်အပြင် လမြင်တာကို သက်သေထူနိုင် သည့် အခြားနည်း လမ်းကော် ရှိပါလား?
ဖြေ-(က) အကယ် ၍ တစ်ဦး တစ်ယောက် တည်း ၏ ပြောဆိုမှု အပေါ်
သံသယ မဖြစ်လျှင် လမြင်တာ ခိုင်လုံပါမည်။
(ခ) အာဒေလ် ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦး သက်သေ ထွက်ဆိုလျှင်လည်း လမြင်
(ဂ) သံသယ ကင်းသွားသည့် အထိ လူများလာ၍ လမြင်ကြောင်း
မေးခွန်း၉- သိပ္ပံနည်းအရ သုသေတနပြုချက်ဖြင့် လ မြင်ကြောင်း တင်ပြ လာလျှင် လက်ခံရမည်နည်း?
ဖြေ-အကယ်၍ သံသယမရှိ ဘူးဆိုလျှင် လက်ခံရပါမည်။
မေးခွန်း၁၀- ကျွန်တော်အတွက် လမြင်တာ ခိုင်လုံသွားပါပြီး ။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အမျိုးသမီး လက်မခံပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမည်နည်း?
ဖြေ-အကယ်၍ လူကြီးမင်း၏ ဇနီး အမြင်တွင် လမြင်တာ မခိုင်လုံသေး လျှင် ၎င်းကို လမြင်ကြောင်းလက်ခံ လာရန် လုပ်ဖို့ မသင့်လျော်ချေ။
မေးခွန်း၁၁-ဒါဆိုဘာဖြစ်မည်နည်း? သူမရိုဇဟ်ထားမည် ၊ကျွန်တော် အီးဒ် လုပ်မည်?
ဖြေ-ဘာမှ ပြဿနာ မရှိပါ။
မေးခွန်း ၁၂- သူမ စယ်ရီ စားရင် ကျွန်တော်ကြည့်မည်။ သူမဝါဖြေချိန် ကျွန်တော်ကြည့်မည်?
ဖြေ-လူကြီးမင်း အတွက်ရိုဇဟ်ထားခြင်းဟရာမ် ဖြစ်ပါသည်။သူမ စယ်ရီ စားချိန် လူကြီးမင်းမနက်စာ (နီယသ်) စားပါ။သူမှ ဝါဖြေချိန် လူကြီးမင်း ညစာ အဖြစ် (နီယသ်) နှင့်စားပါ။
မေးခွန်း၁၃- ကျွန်တော် တနေ့လုံးစားနေရင်လည်းသူမကြည့်နေရမှာလား?
ဖြေ-လူကြီးမင်း သူမနှင့် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်ရန် တနေ့လုံးမစားဘဲနေပါ။ ဘယ်မွတ်ဂ်ျသဟစ်ဒ် က အီးဒ်နေ့ စားဖို့ လိုတယ်လို့ မိန့်လို့လဲ?
မေးခွန်း၁၄-ကျွန်တော် ဒီနေ့ အီးဒ်လုပ်ပါသည်။မြို့တွင်းက အများစု မနက် ဖန် လုပ်ပါမည်။ကျွန်တော် မနက်ဖန် သွားပြီး ဂျမာအသ် နှင့်အတူ အီးဒ်နမာဇ် ဝတ်ပြုလို့ ရပါသလား ?
ဖြေ- ရေဂျာအေမတ်သွလူးဗီယသ် ( رجاء مطلوبیت) ဖြင့် ဖတ်ရပါမည်။
မေးခွန်း၁၅- ရေဂျာအေမတ်သွလူးဗီယသ် ( رجاء مطلوبیت) ဆိုတာ?
ဖြေ- ဤအလုပ်သည် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် လိုလားသည့် လုပ်ရပ်ဟု မျှော်လင့်ခြင်း ကို ခေါ်ဆိုပါသည်။
မေးခွန်း၁၆- ကျန်သည့် celebrations နောက်နေ့ မှ လုပ်လို့ရပါသလား?
မေးခွန်း၁၇-ဥပမာ လည်ပင်းချင်းထိ၍ ဖက်ခြင်း၊ မိုဘာရတ်က် ဟုပြောခြင်း စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါသည် ?
ဖြေ-ဤလုပ်ရပ်တွေကို ရှေ့ ဆက်ပြီးရက်များစွာ ပြုလုပ် လို့ရပါသည်။ မည် သည့် ပိတ်ပင်မှုမျှ မရှိပါ။
မေးခွန်း၁၈- မြို့ကလူတွေ ဒီနေ့ အီးဒ် လုပ်နေကြပါသည်။ ကျွန်တော် အတွက် လမြင်တာ မခိုင်လုံသေး ပါဘူး၊ ကျွန်တော်ရိုဇဟ်နှင့်ပါ။အလွန်ထူး ဆန်းတဲ့ခံစားမှုကို ခံစားနေရပါသည်။ ဘာလုပ်ရမည်နည်း ?
ဖြေ-မနက်စောစော ကားပေါ်ထိုင်ပြီးအချိန်အနည်းငယ် အတွက် မြို့နှင့် ဝေးသည့် နေရာကိုထွက်သွားပါ ။ ရှရီအသ် အရ ခရီးသည် ခေါ် ဆို နိုင်သည့် နေရာအထိပေါ့ ။ ပြီးနောက် ရိုဇဟ် ပျက်လိုက်ပါ။ပြီးရင် ပြန်လှည့် လာပါ ။ ပြီးမှ ရိုဇဟ် ကဇွာ ထားပါ။
အီးဒ် အတွက် လမြင်နိုင် မမြင်နိုင် ၏ ဖြစ်နိုင်သည့် အခြေအနေ သုံးရပ် -
(က) လမြင်ပြီး •မနက်ဖန်ရှောင်ဝလ်လ၏ပထမရက်
(ဂ) လမြင်၊ မမြင်မသိပါ •မနက်ဖန်ရမ်တွာန်လမြတ်၏၃၀ရက်
မေးခွန်း၁၉- ကျွန်တော် အနေဖြင့် လမြတ်ရမ်တွာန်၏ ၃၀မြောက်နေ့ထင် ပြီး ရိုဇဟ်ထားလိုက်ပါသည်။ နေ့၏တစ်ချိန်ချိန် လမြင်သည့် သတင်းရ လိုက် ပါသည်။ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမည်နည်း ?
ဖြေ-ရိုဇဟ်ကို ပျက်ပါ။ ဖေသ်ရဟ်ထုတ်ပါ။
 ဖေသ်ရဟ် ဇကားသ်၏ အမျိုးအစား တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
 ဖေသ်ရဟ်သည် လမြတ်ရမ်တွာန်၏ ရိုဇဟ်များကို (အရှင်မြတ်) လက်ခံ တော်မူစေရန် အကြောင်းခံ နှင့် လာမည့် နှစ် အထိ ငြိမ်းချမ်းမှု နှင့်လုံခြုံ မှု ကို ဖြစ်စေပါသည်။ ( မဖါသီးဟိုလ်ဂျေနန် ကျမ်း )
ရှေ့တွင် မိုအ်မေနီ အနေဖြင့် မိမိတို့ တာဝန်များကို လွယ်ကူစွာ ထမ်း ဆောင်နိုင် ရန်ဖေသ်ရဟ်နှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းမျည်းများကို အကျည်း ချုပ် ဖော်ပြထားပါသည်။ အကျယ်တဝင့် အတွက် ဖေက်ဟ် စာအုပ် များ(အေမာမ် မီယာ ဥပဒေ စာအုပ်များ ) ကိုလေ့လာစေလိုပါသည်။
 H.I မောင်လာနာ အလီနာစေရ် မဲဟ်ဒီ ဆပ် အနေဖြင့် စာအုပ်၏ ဤ အပိုင်းကို တည်းဖြတ် ပြုပြင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် ၎င်း ကိုကျေးဇူးတင် ပါသည်။
မေးခွန်း၁-ဖေသ်ရဟ် ဘယ်သူထုတ်ရမည်နည်း ?
အဖြေ -ထုတ်မည့်သူသည် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေ ရှိနေ ရမည်။
(၁)အရွယ် ရောက်လူလားမြောက်ပြီးသူ(မဟုတ်လျှင် ဖေသ်ရဟ် ထုတ်ရန် မလို။) (ရှရီအသ်အရလူလားမြောက်သူ၊ယေဘုယျအားဖြင့် မိန်းကလေး ၈နှစ်(သို့)၉နှစ် ယောက်ကျားလေး ၁၅နှစ်)
(၂) ကောင်းမွန်သည့်သူ ( ရူးနေသူအပေါ်ဖေသ်ရဟ် ထုတ်ရန် မလို။)
(၃)မရှိဆင်းရဲသားမဖြစ်ရ(မရှိဆင်းရဲသူအပေါ် ဖေသ်ရဟ် ထုတ်ရန် မလို။)
မှတ်ရန် - မရှိဆင်းရဲသားဆိုသည်မှာ မိမိ၏ လူနေမှု အဆင့်အတန်းအရ သုံးငွေ များနေပြီးဝင်ငွေ နည်းနေသူကိုခေါ်ပါသည်။
(၄) သတိရှိသူ ဖြစ်ရမည် (သတိလစ်နေသူဖေသ်ရဟ် ထုတ်ရန် မလို။)
(၅) ကျေးကျွန်မဖြစ်ရချေ (လွတ်လပ်သူ ဖြစ်ရမည်။)
မေးခွန်း၂- ဖေသ်ရဟ် မည်သူတွေ အတွက် ထုတ်ရမည်နည်း?
ဖြေ-မည်သူမဆို မိမိ ၊မိမိ၏အိမ်သူအိမ်သား (ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းထံတွင် ထမင်းစားသူလည်းပါဝင်ပေသည်။) ၎င်းတို့အတွက် ဖေသ်ရဟ်ထုတ် ပေး ရပါမည်။ ယုတ်စွ ၎င်းတို့သည် အရွယ်ရောက် သည်ဖြစ်စေ ၊မရောက် သည် ဖြစ်စေ။
မေးခွန်းဆက်(က)-အကယ်၍ ဇိုက်သည်ဟစန်အိမ်တွင်ထမင်းစား သူ များ စာရင်းတွင် ပါဝင်နေပါသည်။ဇိုက်ကိုယ်တိုင် မိမိ ဖေသ်ရဟ်ထုတ်ဖို့ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသလား?
မေးခွန်း(ခ) ဇိုက်အား ဟစန် အိမ် ထမင်းစားသူများစာရင်းတွင် ပါ၊ မပါ မည်ကဲ့ သို့ သိ နိုင်ပါသနည်း?
ဖြေ-ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ပတ်ဝန်းကျင် အနေ ဖြင့် ဇိုက်အားဟစန် အိမ် ထမင်းစားသူများစာရင်းတွင် ပါဝင်ကြောင်း အသိ အမှတ်ပြုလျှင်ဇိုက်၏ဖေသ်ရဟ် ဟစန် ကို ထုတ်ပေးရန်ဝါဂျစ်ဗ်ဖြစ် ပါမည်။ ဤကဲ့သို့ မဟုတ်လျှင် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ပါ။
မေးခွန်း(ဂ)ကျွန်တော် ဖေသ်ရဟ် ထုတ်ဖို့ ကျွန်တော် အဖေအပေါ် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မထုတ်ပေးပါဘူး။ ဤအခြေအနေ တွင် ကိုယ့် ဖေသ်ရဟ် ကိုယ်ထုတ်ဖို့ ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသလား ?
ဖြေ။ ။ မဟုတ်ပါ။
မေးခွန်း ၃- ဖေသ်ရဟ် မည်မျှ ထုတ်ရမည်နည်း ?
ဖြေ- ၃ကီလိုဂရမ် ဂျုံ ၃ကီလိုဂရမ် ဆန်
သို့မဟုတ် (သို့) သို့မဟုတ်
၁ကီလိုဂရမ်တွင် ၆၂.၈၅ကျပ်သားရှိပါသည်။ (သာသာပြန်ဆိုသူ)
မှတ်စု : (က) တန်ဖိုးကို ထုတ်ချိန်တွင် ဂျုံ၏တန်ဖိုးကို ထုတ်နေတာလား ၊
(ခ) သိထားရမည် အချက်မှာ ဂျုံ နှင်ဆန် အပြင် အခြား ပစ္စည်း
မေးခွန်း၎- ဖေသ်ရဟ်ထုတ်ပြီး ဘယ်သူကိုပေးရမည်နည်း?
ဖြေ- အောက်ပါအချက်များရှိသည့် ရှီအာ အစ္စ်နာအရှရီ ကိုပေးရမည်။
(၁) မရှိဆင်းရဲသား ဖြစ်ရမည်။ (မရှိဆင်းရဲသားဆိုတာ မေးခွန်း အမှတ်၁ ၏ အဖြေတွင်ပေါ်ပြပြီးပါပြီ။ )
(၂) အရက်သေစာ သောက်စားသူ မဖြစ်စေရ။
(၃) နမာဇ် ဝတ်မပြုသူ မဖြစ်စေရ ။
(၄) လူသိရှင်ကြား ဂိုနာ လုပ်သူ မဖြစ်ရ။ (ဥပမာ မုတ်ဆိတ်ရိတ်သူ (သို့) ဟေဂျာဗ် မရှိသူ)
(၅) ဖေသ်ရဟ်ကို ဂိုနာ အလုပ်များတွင် အသုံးပြုသူမဖြစ်စေရ။
မှတ်ချက် :(က) ဤကဲ့သို့သော်ပုဂ္ဂိုလ်အား ဖေသ်ရဟ်ပေးခြင်းဖြင့် တာဝန်
(ခ) ဆယက်ဒ် မဟုတ်သူ၏ ဖေသ်ရဟ် ဆယက်ဒ်ကို ပေး၍
မေးခွန်း ၅(က) -ဖေသ်ရဟ် ဘယ်အချိန် ထုတ်ရပါသနည်း ?
ဖြေ- မနက်ဖန်အီးဒ်ဆိုလျှင် ဒီနေ့ ညနေဝင်ပြီးနောက်ပိုင်း
မေးခွန်း၅ (ခ)- ဘယ်အချိန် အထိ ထုတ်ခွင့်ရှိပါသနည်း ?
ဖြေ- • အကယ်၍အီးဒ်နမာဇ် ဝတ်ပြုမည်ဆိုလျှင် နမာဇ်ဝတ်မပြုခင်အလျင်
မဟုတ်လျင် ဇဟိုရ်အချိန် မတိုင်မီအလျင်
မေးခွန်းဆက်-ကျွန်တော်အမြင်မှာဖော်ပြပါအချက်များနှင့်ပြည့်စုံ နေ သည့် မရှိဆင်းရဲသား တစ်ယောက်ကို မြင်ထားပါသည်။ကျွန်တော်အနေဖြင့် ၎င်း ကို မနက်ဖန်အီးဒ်ဆိုလျှင်ယနေ့ည မတိုင်ခင် (သို့) ယုတ်စွ လမြတ် ရမ်တွာန် မတိုင်ခင် ကော်ပေးပိုင်ခွင့် ရှိပါသလား?
ဖြေ-လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ၎င်းအားအကြွေး အဖြစ်ပေးထားပါ။ နောက်မှ မနက်ဖန် အီးဒ် ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ဒီည ကို ၎င်းကိုပေးထားသည့် အကြွေးကို ဖေသ်ရဟ် နှင့် မှန်အောင်ပြုလိုက်ပါ။ အကြွေး မှ ဖေသ်ရဟ် ထုတ်ပါ သည် ဟု နီယီသ် ပြုရပါမည်။
မေးခွန်း ၆-ဖေသ်ရဟ်ထုတ်ရန်အတွက် နီယသ်ပြုရန်အရေးကြီးပါသလား?
ဖြေ-ဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးပါသည်။ ဖေသ်ရဟ် ထုတ်ခြင်းသည် အေဗါဒသ် ဖြစ်ပါသည်။ဤအတွက်ကြောင့် နီယသ်အရေးကြီး ပါသည်။သတိပြုရမည့် အချက်မှာ နီယသ် နှလုံး၏ ရည်ရွယ်ချက် (ခ) အဓိဋ္ဌာန် ၏ အမည်ဖြစ် ပါ သည်။ နှုတ်ဖြင့် နီယသ်ပြု ကြောင်း ပြောဆိုရန် အရေး မကြီးချေ။ ကျွန်တော် ဤအလုပ်ကို အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သခင် အမိန့်ကို နာခံရန်အတွက် ပြုလုပ်နေပါသည်ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် (ခ) အဓိဋ္ဌာန် သာလျင် ရှိဖို့လိုပါသည်။ ဤသည်နီယသ်ဖြစ်ပြီး လုံလောက်ပါသည်။
မေးခွန်း ၇ - ဖေသ်ရဟ် ပေးချိန်ဖသ်ရဟ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြဖို့ အရေး ကြီး ပါသလား?
ဖြေ-မလိုပါ။ အကယ်၍ ဖေသ်ရဟ်ယူသူအတွက် ၎င်း၏ သိက္ခာ နှင့်အရှက် အတွက် ထိခိုက်စေမည်ဆိုလျှင် မပြောတာ ပိုကောင်းပေသည်။
وصلّی الله علی محمّد وآله الطّاهرین
လမြတ်ရမ်တွာန် နှင့်ကဒဲရ်ညများတွင်ဒိုအာပြုပေးရန်မေတ္တာရပ်ခံပြီးလူကြီး မင်း ၏ မှတ်ချက်များ နှင့် အကြံပေးချက်များကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။